Porn-related ED4၏ပုံပြင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - အပိုင်း ၈ တွဲ
Porn-Related ED4၏ပုံပြင်များ
Porn-related ED 1 ၏ပုံပြင်များသည်အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါသောပုံပြင်များဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသားများမှကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အစီရင်ခံစာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းများအတွက်ဤ porn-induced ED thread နှင့် forum section ကိုကြည့်ပါ။
ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက Porn ကိုကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်) ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုမရမှီအထိကျွန်ုပ်သည်အတိတ်ကပြaနာမရှိခဲ့ပါ။ အခက်အခဲများနောက်ကျနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြgettingနာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုသတိပြုမိလာသည်။ ငါ့ဘဝရဲ့အဲဒီအချိန်အထိငါအမြဲတမ်း command ကိုသုတ်သင်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်၊ အမြန်နှုန်းမြင့် porn ပြီးနောက်ငါကအချိန်ရဲ့ ၄၀% ကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မကြာခဏဖြစ်လာသည်။ ငါဟာသူမကိုစွဲဆောင်မှုမရှိတော့သောကြောင့်၊ ငါအရမ်းချစ်တဲ့မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရတာအကြောင်းမရှိဘူး။ ငါထိုင်ခုံမှာဓာတ်ပုံ 2000 ရဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရပြီးနေ့လည်ခင်းတစ်ခုလုံးကပဲ porn ကိုကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ပို၍ အဆင်မပြေတော့ပါ။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည့်အခါ၎င်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ် (ချွေးထွက်ခြင်း) နှင့်အားနည်းသောဆုလာဘ်ဖြစ်သည်။ ငါထွက်ခွာသွားတာနဲ့တူတယ်၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှာပုံဖော်ရတယ်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ကိုလနဲ့ချီလိမ်ညာပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ကသူမလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်းယခုတွင်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာမရှိသင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်အလားတူပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ ငါထလိုက်ရင်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဘယ်တော့မှထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိဇနီးနှင့်အတူတူပင်ပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယခုဇနီးနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ပြwifeနာမှာငါ pmo ကိုရက်အနည်းငယ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ပြproblemsနာများ နည်း၍၊ လိင်မပါလျှင်ငါဆုတ်ခွာရန်စိတ်ပြင်းထန်သည်။ Mood swings နှင့်မြေတပြင်လုံးကိုးကိုက်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုလိင်မုန်းတယ်လို့ပြောတယ် ဒါဟာအဆင်မပြေကြီးနှင့်သူမအစဉ်မပြတ်ငါကငါ့အပြproblemsနာများအတွက်သူမ၏အမှားဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။
ငါညဥ့်နှင့်နံနက်ယံ၌စိုက်ထူရတဲ့နေပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းစိုက်ထူခြင်းကိုဆုံးရှုံးခြင်း၌ပြaနာမရှိခဲ့ပါ။ ငါထပြီးတာနဲ့ငါညဉ့်ကိုတက်သည်။ နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်အားမိန်းကလေးနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ကပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းလာသည်။ Quick ဟာညီမျှခြင်းထဲကဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက်တွင် pmo မပါရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် ငါရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပေါက်ကွဲသို့မဟုတ်သေအံ့သောငှါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နေတယ်။ အရမ်းသူကပြောတယ်လွယ်ကူပါတယ်။ ငါအရင်ကလိင်တူဆက်ဆံတာကိုငါမခံစားရတော့ဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ဇနီးကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ ။ ဒီဟာကငါမ big ကြီးဘူး။ တကယ့်အမျိုးသမီးကိုတပ်မက်မှုဖြင့်ပြန်ကြည့်မိသည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များမရှိသေးပါ။ သူတို့ကိုငါရမယ်မသေချာဘူး ငါစပြီးကတည်းကဒီတနင်္ဂနွေကိုပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမယ်လို့ငါသံသယရှိတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ ဒါကိုမစဉ်းစားဘဲ ၁၀ မိနစ်ထက်မနည်းကြိုးစားဘဲမနေချင်ဘူး။ Karezza ငါ့အတွက်သေချာမသိဘူး ပွင်အားလုံး gos မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါမသိဘဲမပါဘဲဤအဘယ်သူမျှမ PMO နှင့်အတူ2ပတ်အကြာကစတင်ခဲ့သည်။ ငါလည်း ED နဲ့ပြproblemsနာရှိနေတယ်။ မနေ့ကငါ PMO မပါတဲ့အရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါ hehe ပြန်ဖြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာ၊ ရှေ့စာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီးသင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ post တချို့ကိုစဖတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ရရှိပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအရမ်းခက်ခဲနေတုန်းပဲ။ ၂ ပတ်လောက်ကြာပြီ။
ငါ ၁၄-၁၅ နှစ်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အခုငါအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ။ တကယ်ရှက်တတ်တယ်၊ ငါမှာ gf မရှိဘူး၊ အသက် ၂၁ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘ ၀ နဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ဟာ့ခ်ျတွေကိုငှားရမ်းပြီးငါမိန်းကလေးတွေနဲ့ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့သတိပြုမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြisနာကငါကိုစိုက်ထူထားဖို့တစ်ခါတစ်ရံခဲယဉ်းတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိရင်တခါတရံမှာဘာမှမခံစားရဘူးဒါမှမဟုတ်ပျင်းရတာပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။ ပျော့ပျောင်းစေရန် ငါကဒါကို porn ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကအဲဒါကိုချစ်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်၊
ငါနေဆဲဈကောင်းစွာ dopamine အင်ဖိုနားလည် dont ပိုပြီးအချက်အလက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မ PMO နှင့်အတူစောင့်ရှောက်မည်။ ဒီ2ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့ကိုယ် masturbating မပါဘဲ3သို့မဟုတ်4ကြိမ်နဲ့တူညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပေမယ့်ကိုယ့်လှိုင်းစတားမင်းသမီး၏ဓာတ်ပုံများကိုများအတွက်ကို web များပြုကြောင်းမှားသလဲ ကိုယ်ကကြင်ကြင်နာနာ၏ညစ်ညမ်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ငြိမ်သက်ဖို့ကျွန်မကိုကူညီဖို့, ဒီနေ့စဉျပွုပါပွီ။ ကိုယ်တစ်ဦးစှဲလမျးသူဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံဖို့ရှိသည်, ထိုသို့သူတို့အားဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရပ်တန့်ဖို့တကယ်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါသည်လည်းယူပြီးအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး proccess ကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်သိရန်လိုသလား? ကိုယ့်တနင်္ဂနွေဖွင့်အရက်ကိုမသောက်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံကိုယ့်ကိုလည်းတနင်္ဂနွေ ecstasy ယူပါ။ ကိုယ့်မူးယစ်ဆေးမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိကြပေမယ့်ကိုယ့်ပါတီပေါ်သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့အပေါင်းကငါ့ကို alot စကားပြောပါစေနှင့်မိန်းမတွေ့ဆုံရန်။ တစ်ချိန်ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ဈဈတနင်္ဂနွေနှုန်း4ဆေးပြားနဲ့တူတာကိုခံခဲ့ရပါတယ် cuz ကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုများထဲကရတဲ့ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်တော့ဘူး။ 1 လလွန်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုထပ်စတင်ခဲ့ပေမယ့်ဖွင့်တစ်ဝက်ဆေးလုံးသို့မဟုတ် 1 အများဆုံးနှင့်မတိုင်းတနင်္ဂနွေ။
PD ။ ငါ့အစာအရေးအသားအတွက်မဆိုအမှားရှိလျှင် english, တောင်းပန်ပါတယ်ငါ့အမိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်။
Rising Sun က!
အိုကေ၊ ကျွန်တော်အသက် ၈ နှစ်မှစ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တဲ့အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးပါ။ အစပိုင်းမှာတော့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ၊ သတင်းစာတွေကဓာတ်ပုံတွေ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကအသက် ၁၂ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဟာအရူးတစ်ယောက်လိုတစ်နေ့ကိုအကြိမ်ကြိမ်မပြုခဲ့ပေမယ့်တစ်နေ့မှာတစ်ကြိမ် porn (တစ်ချိန်ကပိုပြီးများပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံနည်းသော်လည်းတစ်နေ့မှာတစ်ကြိမ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်တွေကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်မကိုနှိုးဖို့အတွက်ပိုပိုပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ porn လိုတယ်၊ ဒီနေ့မှာငါအရာအားလုံးကိုတွေ့ပြီ။ နာမကျန်းဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပျက်လာတာနဲ့အမျှရောဂါပိုးမွှားတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတာငါမြင်ပြီ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်အကန့်အသတ်ရှိသောလိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကအားနည်းသောစိုက်ထူခြင်း၊ နံနက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကျပန်းပေါက်ခြင်းနှင့်ငါ့လိင်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါ၊ (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နက်ရှိုင်းတဲ့အတွင်းမှာငါလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ဆန္ဒတကယ်မရှိဘူး။ ) ငါနင့်ကိုထနိုင်အောင်ကပ်လိုက်တဲ့အခါငါကအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုခံစားနေရပြီးတစ်မိနစ်အတွင်းပုံမှန်နှိုးဆွခြင်းကိုခံနိုင်လိမ့်မယ်။ ငါတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခါအစဉ်မပြတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုလေ့ကျင့်သောနည်းဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုတို့ကိုခံစားရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုစွဲစေနိုင်သောပြtheနာများကိုအွန်လိုင်းမှဖတ်ပြီးသောအခါ reboot ကိုစတင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ libido ကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ PE ကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားငါဘာမျှခံစားရတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ နံနက်သစ်သားမရှိခြင်း၊ မိန်းမအစစ်အမှန်ဘဝမှာဆန္ဒမရှိခြင်း၊ ငါ၌စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်အားနည်းသောနံနက်တောအုပ်အချို့ရှိသော်လည်း၊ ဒါက ၁၀ ရက်ကြာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ ၁၁ ရက်လောက်မှာကျွန်မက hornier နဲ့ hornier တွေစပြီးခံစားလာတယ်။ စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပိုပိုပြီးသတိထားမိလာတယ်။ ပြီးတော့ (စိုက်ထူအားနည်းနေသေးပေမယ့်) စိုက်ထူမှုတွေကိုအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားလာရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့တယ်။ ဒါက ၁၄ ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးငါဟာအမြဲတမ်းအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ libido ပိုကောင်းလာပြီလို့ကျွန်မတကယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့်ငါဟာတိုးတက်မှုရှိမရှိသိဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့စမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ကောင်းပါတယ်။ ငါအလွယ်တကူအပြည့်အဝ, 10% ခိုင်ခံ့စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သည် (ငါစတင်ခဲ့သည့်အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ, 11% ဝန်းကျင်ဖြစ်သကဲ့သို့) ငါ 14+ မိနစ်အဘို့, အဆက်မပြတ် (စုန်းမတိုင်မီမဖြစ်နိုင်ခဲ့) စဉ်ဆက်မပြတ်နိုင်အောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် PMO မပါဘဲ ၂ ပတ်ကကျွန်တော့် ED နဲ့ PE ကိုကုသပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါရောက်တာနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကငါ reboot စလုပ်တဲ့အချိန်မှာအခြေအနေတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။ တနည်းကား, လိင်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအလိုဆန္ဒမရှိ, မိန်းမတို့အဘို့အလိုဆန္ဒ, ဘာမျှမ။ ဒါဟာလွှတ်ပေးရန်တိုက်တွန်းခြင်းသာဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ libido လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။
ယခုတွင်ငါသည် PMO မရှိသည့်အပိုင်း ၂ ကိုစတင်တော့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စမ်းသပ်မှုများနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းများကိုမစမ်းသပ်ပါ။ ငါ2ပတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင်ကြပြီ2လအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရန် ၄ လလောက်သာလုံလောက်သင့်သည်။ အခုငါ ၅ ရက်ရောက်နေပြီ။ ပထမ ၅ ရက် ၅ ရက်မှာထပ်တူခံစားရတယ်။ ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းမကြာခဏဆိုသလိုတင်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါထပ်တိုးသင့် PMO လည်းငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါ A အများကြီးပျောက်ကင်းစေသည်ဟုထပ်မံသငျ့သညျ။ အရင်တုန်းကကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဖူးတယ်၊ အခုတော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြုံးနေတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ၏ကညာခံစားမှု asexual, အကြံဥာဏ်လိုအပ်
ခေါင်းစဉ်တော်တော်များများကဖွင့်အကျဉ်းချုပ်။ ငါနင့်ကိုမကြည့်လို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုတစ်ချိန်ကအော်ခဲ့တယ် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းအပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောစွမ်းအားနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဆင့်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ အလားတူပြproblemsနာများကိုကျော်လွှားနိုင်သူသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်ရှိသူအခြားသူများလား။
ငါခန့်မှန်းရခက်တဲ့ကောက်ချက်ချပြီး ၂၀ နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာရှိလို့ငါ့ရဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးလာတယ်။ ငါ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ညတည်းရပ်တည်မှုတွေရှိပေမဲ့ငါဟာ PIV ကိုဘယ်တော့မှမစီမံခဲ့ဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကဲ့သို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၄ နှစ်လုံးလုံးအစားထိုးဖြုန်းတီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ED ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများအလွယ်တကူမည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၄၈ တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေပြီးရှည်လျားသောကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမျှော်လင့်ပါသည်။ ၄ လမှ ၅ လကြာရင်တောင်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ PMO 48 နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာအစွန်းရောက်အမျိုးအစားတွေအထိတိုးများလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုမှားအောင်မလုပ်ပါနဲ့၊ ငါကအဆိုးမြင်မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်မှာသေချာတယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာလိင်မှုကိစ္စကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်အချိန်ကပိုကြာနိုင်တယ်ထင်တယ်။
လုပ်သာလုပ်။ သင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကိုပြန်မယူမီ (၎င်းသည်ခဏကြာနိုင်သည်)၊ သင်သည်အခြားကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအလျင်အမြန်ရရှိမည်။ ကြောင်းလှုံ့ဆော်သင်သည်စောင့်ရှောက်မည်။
ယခု 24 နှစ်ပေါင်း - ငါအကြောင်းကို 10 များအတွက် porn နှင့်အတူရုန်းကန်နေ (ငါ၏အမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်မရှင်းလင်းအင်္ဂလိပ်အဘို့, ဒါကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ်) 13 နှစ်ပေါင်းဂျာမန်လူကိုဖြစ်၏။ အားလုံးထိုကဲ့သို့သော softcore မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ရုပ်ရှင်များ, ပွင့်လင်းတီဗီအတွက်လိင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသောအရာတို့ကိုအဖြစ်, ဘုံပစ္စည်းနှင့်အတူ 13, 14 န်းကျင်တော့တာပဲ။ ငါအပျိုဖော်ဝင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းမဆိုကြင်နာပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့လည်းအသက်အရွယ်န်းကျင် (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသော) masturbating စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအမာခံရုပ်ရှင်တွေပင်ဤအချိန်တွင်ကျောင်းအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ခဲ့ပြီးသောပုံမှန်ကို VHS ဗီဒီယိုတိပ်ခွေ, (ငါအချိန်တွင် 13 သို့မဟုတ် 14 နှစ်ပေါင်းခဲ့သည်) တို့ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကအားလုံးကိုဖိုင်ခွဲဝေမှု, ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင် (အခမဲ့နမူနာ), အင်တာနက်နှင့်အတူ JPEG နှင့် discettes နှင့်အတူပထမဦးဆုံးတော်တော်ဟောင်း-ကျောင်းမှာဆိုးရွားလာခဲ့သည်, ပြွန်စသည်တို့ကိုငါကျောင်းမှာအပြီး (ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌မရေမတွက်နိုင်သောနာရီပေါင်းင့် ,) စသည်တို့ကိုအားလပ်ရက်အတွက်အစဉ်အမြဲ masturbating နှင့်အသစ်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပစ္စည်းရှာဖွေ။ ကြှနျတေျာ့အရသာ ပို. ပို. တိကျသောနှင့်အစွန်းရောက်အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့ငါ၏ "အစည်းအဝေးများ" ပိုရှည်တယ်ရှည်တယ်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ငါသည်လည်းသင်တို့ရှိသမျှသည်ငါခန့်မှန်းကြောင်းသိရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် "အဘယ်အရာကိုသစ်ကိုဖွင့်" ကိုကြည့်ပါရန်, ငါကိုမှန်မှန်မကြာခဏလိုအရာအချို့အကြိုက်ဆုံးစာမျက်နှာများရှိသည် ...
ငါဟာရည်းစားနဲ့လိင်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါဟာအခုအချိန်မှာတက္ကသိုလ်မှာဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝပြီးပညာတတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်ပျမ်းမျှအားကစားအသွင်အပြင်ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါငယ်ငယ်ကတည်းကတုန်နေတာကြောင့်ငါ့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လို့ပါ။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျော porn ၏ခေါင်းစဉ်မှ: လက်ရှိငါကပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း (ပင်အားလျော့ဒစ်နှင့်အတူနောက်ဆုံးသောကာလ၌, တစ်ခါတစ်ရံ3သို့မဟုတ်4ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်) ရုံအများကြီးမှ masturbating နှင့်အတူ, ငါ့အာနိသင်ပျက်စီးခဲ့ကြပြီး (မြင့်တက်) အများကြီးမှလမ်း watched porn ။ ကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပေမယ့်ငါ porn နှင့်ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကဲ့သို့ဖြစ်၏ပုံပါဘဲ။ ဒါဟာတွေ့ရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုတစ်ခုခု, အစဉ်မပြတ်အမြဲရရှိနိုင်မရှိတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ဒေါ်လာစျေးကုန်ကျပါဘူး ... ကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးကိုထပ်ဖွားများနှင့်သင်တန်းငါသိ, သောညစ်ညမ်းမိစ္ဆာမိတျဆှေမြားနှငျ့အဖျက်အရာနှင့်ကျိန်းသေမဘယ်လိုဘုရားသည်ငါ ရည်ရွယ်လိင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မရဲ့ဘဝကမပါဘဲဒါဗလာဖြစ်ငါအရမ်းကျေနပ်အားရမှုနှင့်အပျော်အပါးပေးခြင်း, အခြားအရာကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
porn သို့မဟုတ်သာမန် erectile တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူကျန်းမာလိင်စိတ်: ငါရှေးခယျြမှုရှိသည်, မှန်း။ ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေရန်, ငါ porn ကိုကြည့်သို့မဟုတ် wanking သည့်အခါဖူး, မငါသည်ငါ၏နောက်ဆုံးအလိုအလျောက်စိုက်ထူ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်း (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသို့မဟုတ်ဒါ 12 ခဲ့) ကိုမှတ်မိနိုင်ပါသည်နောက်ဆုံး Full-လွစိုက်ထူမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ငါတောင်အရာကြိုးစားခဲ့ သိသိသာသာဘာမှငါပင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 1.5 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း jelqing ထံမှတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ပိုကြီးတဲ့ကြက်ရဖို့တစ်ဦးညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်တိုက်တွန်းအတွက်လအနည်းငယ်အဘို့အ jelqing ကိုခေါ်သော်လည်းငါ့လိင်တံ၏အခြေစိုက်စခန်းတစ်နည်းနည်းပျော့ပြောင်းပြီးဖြစ်ဟန်နဲ့ ဒီတစျခုလုံးကိုညစ်ညမ်း-ဆိုး-စက်ဝိုင်းငါ့ကို ပို. ပို. အခွံမာသီးကားမောင်းနေသည်အဖြစ် ထိုအချိန်မှစ. မတည်မငြိမ်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရပါမည်အကြောင်း, ငါ့ကိုယ်ကနေဘေးကင်းလုံခြုံမှု-ကြိုတင်ကာကွယ်မှုသို့မဟုတ်ပင်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ... ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပဲစိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်သိရပါဘူး ယခုညစ်ညမ်းရပ်တန့်။
ငါမ PMO နှင့်အတူပေါင်းစပ် kegels တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်းပင်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အကြောင်း, မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဟေ့ယောက်ျားတွေ, ယနေ့ငါ Porn ED ကနေ Recovery ကိုငါ့လမ်းကိုစတင်နေပါတယ်။ ဤတွင်ကိုငါ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်: ငါ 14 န်းကျင်တုန်းကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်လည်းအခါတိုင်း masturbated ။ ပထမတော့သူကကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါကတကယ်ထိခိုက်နာကျင်သောအချက်မှစိုက်ထူခဲ့သည်။ ငါကွောသေခြင်းတရားချုပ်ကိုင်အခါတိုင်း preforming ငါ၏အဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးအလွန်အကျွံ t ကို porn နှင့် withou masturbating ထားရှိမည်။ ငါညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသွားပြီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ထက် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ masturbating ကြပြီမဟုတ်။ ယခုတွင်ငါသည် 20 အသက်ကောလိပ်အတွက်ဖြစ်၏။ ငါလိင်ခဲ့ကြဖူးဘူးဒါပေမယ့်မျိုးစုံမိန်းမနှင့်အိပ်ရာမှာခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးဒီမိန်းကလေးငါ့ကိုကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်အလုပ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်သောအခါငါသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် (19 အသက်အနှစ်) ကဖွင့်မရနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောသူမ၏အဝတ်နှင့်အတူသူမ၏ပယ်ကိုမွငျလြှငျတောငျမှသောအခါငါကတက်မရနိုင်ဘူး။ ငါ ထိုအချိန်မှစ. အခြားမိန်းကလေးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီးနံနက်တစျဦးစီနှင့်အတူတူညီပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုရှိကြောင်းသိပြီးနေ့တိုင်းပြုလုပ်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုချက်ချင်းအပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ငါသုတေသနလုပ်ပြီး Porn ED အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ ငါ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောပြပြီးတဲ့နောက်စွဲလမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ငါဒီမှာရှိနေပြီ။
ဤသည်နေ့ 1 (ကျနော်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရှာဖွေနေသို့မဟုတ် facebook ကို pics တူသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ masturbating မပါဘဲတစ်ပါတ်ထက်ပိုသွားပြီဖူးဘူး) ဖြစ်ပါသည်။ ငါဂျာနယ်ရေးသားခြင်းငါ့ကိုကူညီပေမယ့်တခြားသူတွေကိုကူညီလိမ့်မယ်မသာကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ မဆိုထောက်ခံမှုသည်အလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည် ငါကသုံးလို့ရတယ်သိကြ!
ငါဆစ်ဒနီသြစတြေးလျကနေ 27yr ဟောင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာသင်တန်းပေးသူဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် In-သဘောတရားနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အလုံးစုံတို့အဘို့ငါမထိုက်မတန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာဖြစ်၏။ ငါကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်နံနက်ငါ့အသက်ကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, တော်တော်ကောင်းကောင်းကိုစားကြလော့။ ငါသည်လည်းတစ်မျိုးရိုးလိုက်ကျောက်ကပ်အခွအေနေတိုပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပြီးငါ့အသက်ကိုမထိခိုက်သင့်ပါတယ်။
အခုတော့ငါဒီမှာမာနထောင်လွှားအသံမုန်းပေမယ့်ငါကောင်းကောင်းကြည့်အဖြစ်ကောင်းစွာ, အသိဉာဏ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူကောင်းတစ် ဦး စဉ်းစားမယ်; ငါ့ကိုငါလေးစားသောအမျိုးသမီးများနှင့်လူများအပေါ်လည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်မှုရှိသည်။ သို့သော် (သို့သော် 'ညည်းတွားခြင်းအမြဲရှိသည်')
ငါမှာရည်းစားမရှိဖူးဘူး ဒါက ...
ငါနှစ်စဉ်ရက်စွဲများစွာသွားပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းစားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ဘူး။ အရင်တုန်းက (၃) ကြိမ်လောက်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၃ ကြိမ်ထက်မကကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်ဖူးတယ်။
ငါ 1995 (ထိုနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမို) အခါ 11 မှာရှာဖွေနေစတင်ကတည်းကငါ့မိသားစုကနေညစ်ညမ်းငါ့စွဲပုန်းအောင်းခဲ့ကြ
ဒါကြောင့်ငါရှုပ်ထွေးခဲ့သည်! ဆိုလိုတာကတော့ငါဟာချိန်းတွေ့တာသိပ်မကြိုက်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ အဲဒါဟာပထမဆုံးတက္ကသိုလ်တက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုချပြခဲ့တယ် (သြစတြေးလျမှာအမေရိကရှိကောလိပ်ကျောင်းစနစ်ကဲ့သို့မဟုတ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်တန်းနည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ထူထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။ အမြဲတမ်းဆင်ခြေ
ထို့နောက်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က ၂၅ နှစ်တွင်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုလိုလားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခိုင်အမာတက်ကြွသောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရံဖန်ရံခါ 'Seinfeld-esque' သဘောထားများ (သင်သိသည်အမြဲဖြစ်သည်) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် အမှားရှာဖွေတာ) ပိုဆိုးဆည်းပူးခဲ့သည်။
ဒါကတကယ်ငါ့အတွက်စို့! ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းမှာကြီးပြင်းခဲ့သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်၊ Dirty Dancing ကိုနှစ်သက်သည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်မျက်ရည်မျက်လုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို“ The Wonder Years” မူရင်း ၈၀ မှ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းအားကြည့်ရှုခြင်း ပြေး။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် UFC တွင်ကြွက်သားကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးခါးအရှည်ဆံပင် (ကျွန်ုပ်၏ ၂၅ ရက်မတိုင်မီ ၇ နှစ်အကြာတွင်၎င်းကိုဖြတ်တောက်သော်လည်း) နှင့်နပန်းသမား (ငါကနေဒါ ၁၂ ပတ်စခန်းသို့ပင်သွားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အရမ်းအားတက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောင်တမရဘူး! အရမ်းရယ်ရတယ်) …အခြေခံအားဖြင့်အလေးမလေးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်၊ အားကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်မှမိန်းမတစ်ယောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုချင်ပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှရှာမတွေ့နိုင်ဘူး၊ ငါဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါနိုးလာလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ကွန်ဒုံးပေါ်လာတဲ့အခါငါဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူး။
ကျွန်တော့် libido တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပြီးအသက် ၂၆ နှစ်ရောက်တော့အရမ်းနည်းသွားတယ်။ ငါစမ်းသပ်မှုအားလုံးပြုမိခဲ့သည်။ ငါဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းသောဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားခဲ့ရ ...
PORN နောက်ခံ (အဖြစ် ... )
အိုကေ၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရန်အချိန်! ငါ ၆ နှစ်အရွယ်မှာငါ့အဖေရဲ့ porn stash (အဓိကအားဖြင့် penthouse မဂ္ဂဇင်း) ကိုတွေ့သောအခါအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းအပြစ်မရှိသေးသေး၊ ကြိမ်။ ထိုအခါငါ6လှည့်နှင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အသက် ၁၁ နှစ်ရောက်တော့သူ့မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဒေသခံ newsagent ကိုတောင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ (ငါပရိယာယ်ဆင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ) ငါမဂ္ဂဇင်းကိုစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲထည့်ပြီး ၀ န်ထမ်းတွေကငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူး ) ။
ကျွန်တော့်ပထမဆုံးကွန်ပျူတာကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ကျွန်တော် ၁၂ နှစ်မှာရှိခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲအင်တာနက် porn ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော့်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အလေ့အထကို ၂၈ မှ ၅၆k နှေးကွေးသော modem အမြန်နှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနွံသွင်းထားလိုက်တယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ 'galleries' နှင့် ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာအောင် download ဆွဲရန်မှတ်မိသွားသည်။
ထိုအခါ broadband တလျှောက်လာ။ ပြွန် / porn streaming ။ ဂယ်ရီ၏ဆလိုက်များနှင့်အခြားသူများကဤတွင်အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏အရသာများသည်ပိုမိုကွဲပြားလာသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးစီးပွားများမှာ ပို၍ များပြားလာသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကြာရှည်စွာရှိပြီးရှာဖွေမှုသည်မရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်: အနည်းဆုံး 1-3x တစ်ပါတ် 11 ၏အသက်အရွယ်ကနေ 28 ရက်အကြာတိုင်အောင်, ငါ P. 17 frickin နှစ်ပေါင်းမှာရှာဖွေနေခဲ့သည် !!!! ငါငိုကြွေးအော်ဟစ်နိုင်ဘူး။
ထိုအ P ကိုဘဲငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကို / စိတ်ကူးယဉ် / M ကိုသုံးပြီးဖြစ်ကောင်းဒါဝမ်းနည်းဖွယ်, P ကိုမပါဘဲငါနီးပါးဘယ်တော့မှ M ကနောက်ဆုံးအ 11 နှစ်များတွင်ဆိုလိုသည်မှာ Porn မှာရှာဖွေနေ၏6နှစ်ကြာရပ်တန့်
ဒါပေမယ့် (၂ နှစ်) လောက်ပြန်သွားရင်တော့ Porn ဟာငါ့ရဲ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနက်နက်နဲနဲသိထားတဲ့အတွက်ငါနုတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ & ကျွန်တော်ကြိုးစားသည်!!!! ငါ Porn log ကိုစတင်ခဲ့သည် (အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်း) နှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းတို့ကိုကြိုးစားသည်။ အကောင်းမြင်အတွေးနှင့်ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားသည်။ ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုမလေးစားပါ။ ငါကိုယ်တိုင်“ နောက်ဆုံးသောကာလ” ဟုမရေမတွက်နိုင်သော 'နောက်ဆုံးကာလ' အတွက်ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များကို ... နောက်ဆုံး 'နှင့်အခြားအလားတူ application များကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါဟာအရာရာတိုင်းကိုကြိုးစားပြီးရက် ၄၀ တကြိမ်လောက်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် willpower ကသင့်ကိုဒီလောက်ထိရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ငါနောက်ဆုံးအကျင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်ပြောပြီးနောက်ဆုံးသောအရာအဖြစ်မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့သော်လည်းဤအလေ့အကျင့် / စွဲလမ်းမှုကိုချိုးဖောက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်ထာဝရပျက်စီးခြင်းအတွက်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုအမှန်ပင်ထင်မြင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘွဲ့သည်စိတ်ပညာနှင့်သမိုင်း၌ရှိခဲ့ပြီးဂယ်ရီ၏ဆလိုက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့သည်။ အာရုံကြောပလပ်စတစ်တည်ရှိနေပြီ၊ ၎င်းတွင်ယခုတွင်သက်သေအထောက်အထားများများလွန်းနေပြီး၎င်းကိုချေပနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သော့ချက်ကကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြုပြင်နိုင်ပြီဆိုတာသိပြီဆိုရင်၊ ဒီသင်တန်းကိုငါတက်ခဲ့တယ်။
သို့သော်၎င်းသည်စွဲလမ်းနေဆဲ ဖြစ်၍ နေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါယခု blogging လုပ်နေသည်။ ၁ လအလိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်နုတ်ထွက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုနှင့်ဤအချိန်တွင်အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
ယခုအဖြစ် "အဖြစ်" အတွက် ...
လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်က (၂၀) ​​တုန်းကအာရှအနှိပ်အလှဆင်ပစ္စည်းဆိုင်များနှင့် 'ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများ' ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ libido လျော့နည်းသွားသော်လည်း၊ အလုံအလောက်ရှိနေတုန်း၊ ! သို့သော် Porn နှင့်အတူငါ့ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သကဲ့သို့လူ့ဇာတိ၌အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်ခြင်း၏ (မှားယွင်းသော) နှစ်သိမ့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ P စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆင်တူသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာများသို့သွားရန်အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ခန့်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်ပါ၊ ၎င်းသည်“ နောက်ဆုံးသောကာလ” ပျမ်းမျှအနည်းဆုံးတစ်လနှစ်ကြိမ်သွားသည်။ ငါ yourbrainonporn.com ကိုတွေ့သည်တိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါလုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ငါ့ခရီးကဒီမှာပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးအလေးချိန် ၅ ပေါင်မှ ၈ ပေါင်အထိလေးသည် (မက်ထရစ်စနစ်ကိုအသုံးပြုသောသူများအတွက် = ၁၇၃ စင်တီမီတာ၊ ၆၉ ကီလိုဂရမ်) ။
ကျွန်ုပ်သည်ဆွီဒင်တွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လူမျိုးသည်ဆွီဒင်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဥရောပသားဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်သည်လူမျိုးပေါင်းစုံရောနှောပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတကယ်မသိသော)
ကောင်းပြီငါ့အသက်ကိုအစဉ်အမြဲငရဲ, ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝတစ်မိသားစုမှဆွီဒင်အတွက်ပထမဦးဆုံးသားမွေးဖွားခဲ့သည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ သငျသညျငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေငါ့ကိုမဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးခဲ့တယ်လျှင်ဈပျက်စီးကြောင်းမဟုတ်ခဲ့, မေတ္တာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများကြီးနှင့်အတူကျန်းမာကလေးဘဝခဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။
ငါ ၆-၇ နှစ်အရွယ်မှာလိင်နှင့်လိင်အင်္ဂါများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စပ်စုလာသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာ၊ အသက်အရွယ်တုန်းကပုံမှန်အားဖြင့်လိင်အကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာလာတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့တခြားနေရာတစ်နေရာနှင့်ဘယ်နေရာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ့အပေါ်
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူကစားခြင်းစတင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလုပ်နေတာအဘယ်အရာကိုမသိမမှတ်ဘဲ, ဒါကြောင့်ဒီသိချင်စိတ်ကြီးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမဟုတ်ခဲ့, နောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့ရဲ့မိဘများကျနော်တို့လုပ်နေတာဘယ်မှာအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့ (အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ရှိ၏) နှင့်ရပ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။
ထိုအခါကိုယ့်တစ်ဦးကံကောင်းချိုးခဲ့! ငါ့မိသားစုတောင်အမေရိကသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရှိခဲ့သည်နေချိန်မှာကိုယ့်သမျှသောပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုမေ့လျော့ကြ၏။ ငါစပိန်ပထမဦးဆုံးစကားပြောခဲ့သော်လည်းအဲဒီမှာပျော်ရွှင်ခဲ့နှင့်အကောင်းဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကျောင်းတွင်လွန်ကဲ။
အမေသည်ငါတောင်အမေရိကရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်၏အိမ်စာကိုသိမ်းဆည်းထားဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏လက်ရေးစာမူသည်ယခုထက် ၁၀ ဆပိုကောင်းသည်။
ကောင်းပြီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုပြန်ဆွီဒင်သို့ပြောင်းရွှေ့နှင့်ဈ (ဈယခုဈ 10 နှစ်ပေါင်းပြည်ပမှာခဲ့3နှစ်အရွယ်မှာ) ကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲနှင့်အဟောင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို, ငါ့ 1 တစ်နှစ်အသက်ကြီးဝမ်းကွဲကယ့်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်လာမှစတင်ကပျော်စရာခဲ့ပေမယ်ငါတို့သည်လည်းမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုသူနှင့် ပတ်သက်. အလွန်လျှို့ဝှက်ခဲ့တစ်ခုခုရှိခဲ့ကြောင်း, မိမိအစ်ကိုအကြောင်းပြောဆိုလာတယ်။
ငါအားလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားဖြင့်နေမကောင်းအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့ happend ဦးထုပ်ကိုတကယ်လိုက်တယ်ခံစားရပြီးကိုယ့်ကိုပိုပြီးထိုသို့ပြုမှလိုခငျြတစ်ခုခုကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိစတင်ဈ MOed (ကျနော် 11 သို့မဟုတ် 12 ခဲ့ပါတယ်) ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်သတိရပါ။
ဒါဟာငါ့အမိဘကအမြဲအမှုအရာအကယ်စင်စစ်, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, လေးနှင့်မြှားကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ထိုကဲ့သို့သော, Smart စပ်စုနဲ့ပျော်ရွှင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဈအသုံးပွုနိုငျသောအရာကိုအံ့ဩ, ကိုယ့်တစ်သက်တာစိတ်ကျရောဂါနှင့် brainfog စတင်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ကူးများနှင့်အထွက်များအပြည့်အဝ။ ယခုဈစုစုပေါင်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
(အဲဒီမှာတစ် weirdest အရပ်တွင်သူတို့အတွေအများကြီး, ဝေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမြန်နှုန်းမြင့်တဝိုက်ခဲ့ပေမယ့်မပေးရာအရပ်,) ကြှနျုပျတို့ porn magasines ရှာနေတောအုပ်၌လှည့်ပတ်သွားကြဖို့စတင်ခဲ့ကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲပြောသည်နှင့်သူလည်း masturbating ခဲ့ဝန်ခံ
လူအပေါင်းတို့သည်လည်းအချိန်ဈတစ်ရက် MOing 1 သို့မဟုတ်2ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးပျင်းစရာကောင်းလာတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မတွေ့ဆုံချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုငါစိတ်မဝင်စားဘူး။ ငါသာ PMO နိုင်အောင်ငါတစ် ဦး တည်းဖြစ်ချင်တယ်။
ငါအိမ်ပြန်ငါ၏အဝမ်းကွဲကိုသွားနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုကစားလိုသောဆင်ခြေတက်လုပ်ပေမယ်သာဒီတော့ညဥ့်လာလိမ့်မည်ဟုကျနော်တို့အထဲကခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ porn Download ကြောင့်စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းဒီတော့လူတိုင်းအိပ်ရာကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ပြုပါလိမ့်မယ်။
သူကတောင်ငါတို့ MO ကိုကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအမြိုးသမီးမြားကြိုက်တယ်သော်လည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားလိုအရှည်သို့ရောက်ကြ၏။
ကအတူတူ PMO မှလိုက်တယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါကြှနျုပျတို့ 15 သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုတယ်အထိဤဆက်ပြောသည်။
ကြှနျတေျာ့အိမျမှာကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီအခြိနျမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတယ်ဈဈအတောမသတ် PMOing တစ်ဦးတည်းအိမ်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆင်ခြေတက်အောင်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါနေ့တိုင်းထွက်အလုပ်လုပ်စတင်ဈ MO ကိုအများကြီးနေ့စဉ်လုပ်ခဲ့တယ်နီးပါးနေ့စဉ် porn မှာ loking, အညစ်ညမ်းကမ္ဘာ၏စံနမူနာတွေနဲ့စွဲလမ်းပြီးကြီးမားတဲ့လိင်တံနှင့်တစ်ဦးဝမ်းကိုခွဲခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်ဖို့လိုချင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါကပိုလေးပိုကြီးတဲ့ငါ့အလိင်တံရလိမ့်မယ် MOed ထင်ခဲ့တယ်။
ငါမလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးကယ့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျ 16 တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကိုယ့်အကောင်းကောင်မှကျေးဇူးတင်စကားဒဏ်ငွေခဲ့တူသောကြောင့်ကြည့်ရှုကြ၏။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတော့ကိုယ့်ကိုခုတ်လှဲရန်စတင်အမှုအရာကောင်းသောကိုကြည့်လွန်းစတင်ရပ်တန့်ခဲ့ရတယ်သိတယ်။
ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောတယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို။ ပင်မုန်းစတင်, ငါမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။ PMO အငွေ့ပျံခြင်း၊ PMO အတွက်ကျောင်းကိုခုန်ခြင်းသို့မဟုတ်“ ဖျားနာခြင်း” ကြောင့်ပျက်စီးသွားသောအလင်းရောင်ကာလတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ (PMOing တစ်ရက်လျှင် ၆ လမှ ၂ လအထိ ၂ ကြိမ်)
ငါအလေးအနက်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကို castrating စဉ်းစား, ကိုယ်, ရှိအေးမြသော, ရှာလကာရည်ကြိုးစားခဲ့, ငါ့လိင်အင်္ဂါ electrocuting ထိခိုက်စေနိုင်သောသို့မဟုတ် numbed တစုံတခုကိုမျှကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါသည်ဤငါ့ကိုမကြီးထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ချင်တယ်!
သို့သော်ဘာမျှမ, ဈ relapses အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက် PMOing နောက်တဖန်ရှိ၏။ ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွှေမယ်လို့ကိုယ်ထည်စဉ်းစားတွေးခေါ်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်ပေမယ့်မှသာအချို့လကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းမဟုတ်တဲ့ Porn အချို့ကိုကာလမှကျေးဇူးတင်စကားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအမြဲတစ်နှစ် 11 ကတည်းကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်တွင်ဈလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျအခွားကျောင်းသားများ, ဆရာပင်အချို့သောစံချိန်နှင့်ဝေး porn ကနေတည်းခိုငါ၏အားထုတ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယနှင့်တတိယနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ထိပ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းမှသည်အတန်းအားလုံး၏ ၄၀% ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ ငါကျောင်းကိုမသွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။ PMO
လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထူးဆန်းမှုတို့ဖြင့်မှတ်သားထားသောအထက်တန်းကျောင်းအားလုံး။ နောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်လာရင် ..
ကျောင်းသွားတက်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ကျောင်းသူ / သားများကိုဘွဲ့ရသည့်နေ့ကကျွန်ုပ်အိမ်ပြန်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့် PMO မရှိကြောင်းသိခြင်း PMO သို့ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်ဖျားနာခြင်းနှင့်အိမ်သို့ သွား၍ PMOed ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ။
ငါ (ဈဘယ်လိုသိ dont ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အသေသတ်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို PMOing မဟုတ်ငါလာသောအခါကိုယ့်အတော်လေးအသိဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းကိုခန့်မှန်း) တက္ကသိုလ်မှလက်ခံဖို့လုံလောက်တဲ့အဆင့်မြင့်သောအရစီမံခန့်ခွဲ
ငါသည်အခြားမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နှင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်တော်တော်လေးကောင်းသောအထဲကစတင်ခဲ့ပေမယ့်ပြီးတော့ကိုယ့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း PMOing စတင်ခဲ့သည်။
ငါထပ်ခါတလဲလဲ porn စံနမူနာကိုတောင့်တခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ကိုယ့်ပိုကြီးတဲ့လိင်တံရဖို့ဂရုစိုက်။
ငါတက္ကသိုလ်ကနေအိမ်ပြန်လာ။ , porn ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်တစ်နေ့လျှင်7မှ 8 ကြိမ်သုက်။ ငါပြိုလဲသည်အထိငါနက်ဖြန်နေ့၌လက်လွတ်မယ်လို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုစား, အိပ်သို့မဟုတ်စိတ်ထဲမထားခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်သုက်ပိုးဖြတ်ပြီးသောအခါငါ "အားသွင်း" သောအခါ, ဒီသံသရာကိုဆက်လက်ငါတီဗီ / စီးရီးကိုကြည့်သို့မဟုတ်အချို့သော FPS ကစားပြီးနောက်ထို့နောက်ငါတိုက်တွန်းပြန်လာခံစားခဲ့ရသည့်အခါကိုယ့်တီဗီ / စီးရီးသို့မဟုတ်ဂိမ်း၏ဆင်တူတစ်ခုခုအတွက်လှည့်လိမ့်မယ်တစ် ဦး ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန် PMOing စတင်ပါ။ ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိသောကျွန်ုပ်၏ကျောက်ကပ်သည်စာသားအတိုင်းအိမ်သာသို့ပြေး။ အမြန်ဆုံးဆီးသွားနိုင်ပြီးအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြန်ပြေးသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိပါကတစ်ခါတစ်ရံအလွန်မြန်ဆန်စွာလုပ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်ဗိုက်မဖြည့်ဘဲဆီးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးကိုယ့် PMO ကိုပြုပြင်ချင်ခဲ့တယ်
အကြှနျုပျ၏သုတ်ရည်ကငါ့အစောင်အပေါ်မှာငါ့ခြေအိတ်ပေါ် flor အပေါ်မှာငါ့အတွင်းခံအဝတ်အစားအတွက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း, ကျဆင်းသွားဘယ်မှာငါဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး (စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သော)
ကိုယ့်ကိုယ်အစားအစာ၏တစ်ပန်းကန်ကိုစားကြ၏တစ်ချိန်ကကိုယ့်စားပွဲပေါ်အထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်ကြောင့်မစား, ထို့နောက်ဈဘာမှကိုစားမယ်လို့, ငါ၏စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး PMOing များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ၌စီးရီးကိုကြည့်ဒါဟာတခါတရံ2ရက်ပေါင်းသွားနိုင်နှင့်ကိုယ်ဘာမှမစားဘဲနေလိမ့်မယ် PMO ရန်စိတ်အားထက်သန်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏လေ့လာမှုများအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ် .. ငရဲသွားဘဲ, ကိုယ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုငါ့ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ပိုကြီးလိင်တံချင်တယ်။
လတွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ sextoy ကိုငါဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုအဆင့်အသစ်သို့ခေါ်သွားတယ်။ ငါဟာအဖြစ်မှန်အပေါ်ချုပ်ကိုင်ထားမှုပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ငါအရူးအမူးနည်းနည်းနည်းနည်းလေးစလိုက်တယ်၊ ငါကိုယ်တိုင်စကားပြောပြီးအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒီဖြစ်ရပ်မှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအတိုင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီအကြောင်းကိုငါတကယ်သေခဲ့ပြီလား၊ တခြားနေရာတစ်နေရာနိုးပါ။
ငါသာမင်းကိုငါ့ PMO ပြင်ဆင်ချက်တယ်ဒါပေမယ့်အပြီးကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုမြူခဲ့ပြီးနောက်ဈရှင်းရှင်းလင်းလင်း 2-3 မိနစ်စဉ်းစားခဲ့သလိုခံစားရတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့ ၂ ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါဟာအနီးအနားရှိရေကန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေနစ်သေဆုံးအောင်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်“ နိမိတ်လက္ခဏာ” ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့မြူခိုးဉာဏ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဂရာဖီတီတချို့ရှိနေတယ်။ ငါ့အဝတ်အစားတွေကိုကျောက်ခဲတွေနဲ့ပြည့်အောင်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်မှာလူကုန်ကူးတဲ့လမ်းပေါ်မှာငါလမ်းလျှောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ယာဉ်မောင်းတွေကသတိရှိရှိမောင်းနှင်နိုင်သည့်နေရာတွင်လမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်ခဲ့သည်
ငါအင်တာနက်စွဲခံခဲ့ရသည်သောငါ၏မိဘများကိုပြောသည်နှင့်ကိုယ့်ဘဝကိုဖွင့်လွဲချော်သွားတာကြောင့် (PMO အကြောင်းကိုမပြောခဲ့ပါဘူး) ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုယူစေခြင်းငှါတောင်းပန်။ သူတို့့ယခုနောက်တဖန်မရပ်မနားလေ့လာနေနှင့်ကောင်းသောအကျင့်ခံခဲ့ရခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ့် PMO ပြီးနောက်ရှည်လျားမှစတင်ခဲ့အဆိုပါ, အတောငျ့ဈတက္ကသိုလ်ထဲကကျဆင်းသွားကြောင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် (ဈယခုဈလက်ရှိတွင်ပြန်ပေးဆောင်ငါကြီးမားတဲ့ကြွေးမြီရှိသည်) PMOing စတင်ခဲ့သည်။
1 တစ်လပြီးနောက်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကိုယ့်လက်ရှိဇနီးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဈဒီတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဈခဏမျှ PMO လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်တဖန်စတင်ဈလိင်အတွက်အတွေ့အကြုံဖြစ်သို့မဟုတ်ဈနောက်တဖန်စတင်မဟုတ်တဲ့ porn လိင်တံရှိသည်ဖို့မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ ငါအချို့ ED ပြဿနာများကိုကျွန်ုပ်တို့လိင်ရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်ရှိသည်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ (ဈအမြဲတစ်ဦးအလွန်အားကောင်းတဲ့လိင်စိတ်ခဲ့ကြပါပြီ) ကိုယ့် porn အပေါ်စဉ်းစားရန်စတင်နှင့်ကငါ့ကိုခဲယဉ်းလုပ်
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အတွက် 6th သို့မဟုတ်ကျနော်တို့လိင်ခဲ့ 7th အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင် ejaculate နိုင်ဘူး။
ဒါပေမယ့်ငါမူတည်ပြီး PMOing နဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာ PMOing ကိုအဆုံးသတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။
ငါကလိမ်များကဲ့သို့ခံစားခဲ့ပေမယ့်ရပ်တန့်ဖို့ခံ့ညားခဲ့ဈ PMOing ခံခဲ့ရသောငါ၏ဇနီးဆီသို့မကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်, ငါ့စွဲလမ်းရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ကိုယ့်တော့ဘူးဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။
စွမ်းအင်မရှိခြင်း, မိုးအုံ့မျက်စိ, ဦးနှောက်မြူ, irritbility, အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, 48 ပေါင်အကြောင်းကိုအလေးချိန်ရရှိခဲ့တူသောငါသို့သော်တစ်ဦးကိုငါ့လက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးရွားလာရ start ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကော်ဖီသောက်တာ၊ သောက်တာ၊ ကော်ဖီအမျိုးအစားအားလုံးကိုမျိုချတာစတာတွေပဲ။
ငါ 45 ပေါင်ချွတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ငါပိုကောင်းခံစားခဲ့ရပေမယ့်သူမအကြှနျုပျ၏အရေးပါသောအမှားဘာမှရှာမလို့တုန်းပဲထူးဆန်းတဲ့အကြှနျုပျ၏ဆရာဝန်တစ်ဦးစိတ်ပညာရှင်မှငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။
ငါ့ကိုရပ်တန့်ဖွဲ့သောပထမဦးဆုံးအရာ, ငါ့ဇနီးငါ့အ pornsites ဈပိတ်ဖို့ရန်မေ့လျော့ခဲ့သောတွေ့ခဲ့သည်, ကိုယ့်ကိုယ့်အကြောင်းကို2လလောက်လုပ်ခဲ့တယ်, ကိုယ့်အကူအညီနှငျ့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်! ဒါဟာကိုယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြံပြုချက်များအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူးနှင့်ဈအလွန်အမင်းအလုပ်မှာအောင်မြင်သောနှင့်ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့သမျှကိုအတူရှိ၏သော်လည်းငါ့အသက်ကိုအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။
ငါ ADHD နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ် (သို့သော်ယခုငါသာပြဿနာကို PMO ခဲ့ထင်, ကိုယ့်ဟာစိတ်ပညာရှင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်)
နှင့် Concerta ပေးထားခဲ့ပါတယ်, ကငါ့အသက်ကို၏ကျန်နှင့်ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းမော်ဒယ်မဟုတ်တဲ့ဝတ်လစ်စလစ်က်ဘ်ဆိုက်များမှငါ့ကိုဦးဆောင်, ပြီးတော့ youtube လုယူဗီဒီယိုများပြီးတော့ဝတ်လစ်စလစ်ခုန်တွေနဲ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင် porn ရန်။
ငါ 8 တစ်လ 10-1 နာရီနေ့တိုင်း, ဒီ relapse တော်တော်လေးဆိုးခဲ့, နောက်တဖန် PMO ပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့် PMOed နောက်ဆုံးအချိန်စနေနေ့ခဲ့, ဒါကြောင့်ကိုယ့် (2 ရက်ပေါင်းသွားကြဖို့) နေ့က 88 အပေါ်ဖြစ်၏, သို့သော်ဤအချိန်ဈအကူအညီနဲ့ရှိသည်, ကျွန်တော့်ဇနီးကိုယ့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေပါတယ်သည်အထိ, တကအသံဖြစ်နိုင်သည်မှာအနည်းဆုံး 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့အားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုငြိမ်းဖို့သဘောတူ အကြီးအကျယ်ကိုက်ပေမယ့်ငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကမဖြစ်မနေဖြစ်၏။
ငါဒီ site ကိုငါပြောင်းပေးလိမ့်မယ်နဲ့ကိုယ်ငါတို့ရှိသမျှသည် soo အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်, လွန်းဤနေရာတွင်အခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့, ငါ၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်တွေ့ပြီဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း။ ဤသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးသည်ဦးနှောက်နှင့်တွဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူရုံလိင်တံမဟုတ်, ငါတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ WE ဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်နှင့်တောက်ပသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူလူဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့အများကြီးဖန်တီးနိုင်! ကိုယ့်ဟာကမ္ဘာ့မှာအပေါငျးတို့သနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှု, အနုပညာအပေါငျးတို့သသည်အကျင့်ကိုကြည့်, လူအပေါင်းတို့သည်ဂီတ, အားလုံးအားကစားအောင်မြင်မှုများစာရင်းကိုရှည်လျားစေနိုင်ပါတယ်။
ဖိုရမ်တွင်မပါ ၀ င်ခြင်းအတွက် (၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲများလည်းရှိသော်လည်း) ကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ကျွန်ုပ်သည်လူတို့အားပြောစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အကြိမ်ကြိမ်အရက်သောက်ရန်ခက်ခဲနေသောကြောင့်။ ဒါဟာရှက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကစပြီးညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုငါသိတယ်။ အခုငါဘလော့ဂ်တစ်ခုစလုပ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အတူတူလုပ်နေတာလား ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုစားသုံးခြင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ED ပြproblemsနာတွေကိုသတိထားမိပြီးဒီ ဦး နှောက်ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာပျက်စီးစေတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပိုနီးကပ်လာမှာကိုကြောက်တယ်။ -fog သို့မဟုတ်သို့သော်အမည်ရှိ; မင်းဟာဘဝမှာဘာကိုရှာနေတာလဲ၊ ဒီနည်းကိုရှာမတွေ့နိုင်တာ၊ ကျနော့်အမြင်အရဤဖိုရမ်တွင်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာအာဟာရနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ပထမဆုံးဘလော့ဂ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ မင်းကိုမငြိုငြင်ချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလုပ်တဲ့နိဂုံးကိုသွားပြီးငါ့ဘဝကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ် (မဟုတ်ဘူး၊ စာအုပ်မဖတ်သေးဘူး)၊ ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ဖို့ ဘဝမှာ ME အတွက်အရေးကြီးတယ်၊
* ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်းကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ (ဒါကိုတကယ်မနှစ်သက်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့သင်ကလူမှုကွန်ယက်တွေနဲ့မရင်းနှီးဘူးတောင်မှ၊ ဒီဟာကိုသင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်ပို ဒါ့အပြင်ငါလူတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်သိချင်တယ်)
* အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့သည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိ။ ငါသိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမဟုတ်ပါ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံးအွန်လိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် netbook နှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုညနေ ၈ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ Mo-Sat ရှိကျောင်းဝင်းတွင်ရှိသည်။
အလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးအခမဲ့ porn-filter တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ သင်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည် (http://www.cloudacl.com/) ။ ၎င်းသည်စကားဝှက်မပါဘဲသို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိကအချက်မှာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျပန်းပင်မမြင်ရခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းလွဲစေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏အစားအစာကိုသန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားခြင်း။ တကယ်တော့ဒါကငါ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အချက်ပဲ။ ငါဟာအာဟာရကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျန်းမာတဲ့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်အနည်းငယ်လောက်ကိုဖတ်တဲ့လူတိုင်းကမတူညီတဲ့ထင်မြင်ချက်တစ်ဒါဇင်ရှိတာကြောင့်အဲဒါကတော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာသဘောတရား (၂) ခုရှိတယ်။ Robb Wolf ရဲ့စာအုပ်မှာရှင်းပြထားတဲ့ကုန်ကြမ်း - အစားအစာ - အစားအစာနဲ့ paleo - အစားအစာ။ ကောင်းပြီ၊ ငါအဲဒါကိုကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ငါ့အတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသော်လည်းငါလမ်းခရီး၌ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကိုစမ်းသပ်သည်။ ဘာလို့မေးတာလဲ ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့ဒါဟာရှုပ်ထွေးပြီးနောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာမခက်ခဲပါဘူး။ ငါ့မှာပိုက်ဆံသိပ်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသားတွေ၊ အသီးအချို့၊ အခွံမာသီးအချို့ကိုစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြွင်းချက်တွေခွင့်ပြုသည်။ တစ်ပါတ်ညနေခင်း) ။ ငါကဲ့သို့ခံစားရသောအခါငါအရက်, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါကရွယ်တူချင်းဖိအား - အရက်သေစာမစားဘူး၊ ငါ့ဘဝမှာမကြာခဏပါဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ အာဟာရကိုပြန်သွားပါ (ဒါကကုန်ကြမ်း - အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အငြင်းအခုံဖြစ်တယ်)၊ ကျနော့်အမြင်မှာသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဟာကုမ္ပဏီမှာ (ဥပမာသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူချက်ပြုတ်ခြင်း) ၌သင်၏အစာစားခြင်းကိုနှစ်သက်ရမည်။ သင်ကခံစားဖို့ရှိသည်။ စားတာကကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်သလား။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူချက်ပြုတ်ရတာ၊ အစာစားရတာကိုဝါသနာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ porn-related reboot တိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်အားခြွင်းချက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မထင်ပါ၊ သူတို့သည်ငါ့ကိုသတ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အငြင်းအခုံကငါဟာမာကြောသူ၊ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်သည်သက်သတ်လွတ်စားခြင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ဆန်၊ ပဲ၊ tofu၊ ခေါက်ဆွဲ၊ oats စသည်တို့) ကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးပြီးကျွန်ုပ်အလွန်ခံစားခဲ့ရသည်၊ အသားအရေအလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်အကြောင်းပြချက်မှာကျွန်ုပ်၏အစားအသောက်သည်ယခင်ကဖြစ်သည် ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ထို့အပြင်ငါအလေးချိန်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
* အထက်ပါအချက်ကိုပြီးစီးခြင်း - ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုကျွန်ုပ်မယုံကြည်လိုတော့ပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ခြင်းသည်ကျန်းမာသောအစားအစာအတွက်လုံလောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
* ငါလာမယ့်စနေနေ့စတင်အချို့ Cross-မထိုက်မတန်-သင်တန်းတစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်မှတ်ပုံတင်
* နောက်အပတ်မှာလည်းငါမြို့ရဲ့ SLAA အုပ်စုထဲကိုဝင်မယ်။ ကြည့်ကြရအောင်၊ ဒါကကျွန်တော့်ကိုဒီကူခြင်းနှင့်အတူလာကူညီနိုင်မလား။
* ထိုသင်တန်း၏ငါငါ့အဘို့အလွန်ခက်ခဲအထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုကာလ၌ဖြစ်သော, စီးကရက်ထွက်ခုတ်ဖြတ်။
22, ED နှင့် reboot
အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်: 22 နှစ်ရှိပြီ, 13 အကြောင်းကိုကတည်းက PMO အပေါ်ဖူး။ အချို့တော်တော်လေးကောင်းသောလိင်ပါဝင်ပတ်သက်ရသော5နှစ်ပေါင်းတစ် gf ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတစ်ကြိမ်သူမ၏နှင့်အတူ ED ကြုံတွေ့ပေမယ့်တစ်ခါသာ, ငါငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်အမြိုးမြိုးထဲကဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချွတ်ရေးသားခဲ့သည်။
ငါတို့ဒီဇင်ဘာလမှာပြိုကွဲသွားတယ်၊ မကြာသေးခင်ကငါကတခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်မိခဲ့ပေမဲ့မထနိုင်ခဲ့ဘူး။ တနည်းကား, ပထမ ဦး ဆုံးငါသူမငါကြိုက်တယ်သကဲ့သို့ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခြင်းမဟုတ်အဖြစ်, ပင်ပန်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ချွတ်ရေးသားခဲ့သည်။ YBOP ကိုရှာတွေ့မှသာသူဟာ PMO ပါ၊ သူမမဟုတ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိတာကိုသတိပြုမိတာကကျွန်တော့် ED ကိုဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအမြဲတမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အကြှနျုပျ၏အခြေခံရည်မှန်းချက်အဘယ်သူမျှမ PMO နှင့်အတူ 10 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ P ကိုသာမဖြစ်စလောက်အမ်အတူအပြီးတိုင်ကွယ်ပျောက်ရလိမ့်မည်
အစဉ်မပြတ်ငါလှသောလူမှုရေးလူတစ် ဦး ဖြစ်, ဒါကြောင့်လူမှုရေးအရမျှော်လင့်ထားသည့်အပြောင်းအလဲများကိုဘယ်လိုငါမသိရပါဘူး။ ငါလူသစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာအဓိကအကျိုးအမြတ်တွေရဖို့မမျှော်လင့်ဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်ချင်တယ်။ ငါစိုက်ထူခြင်းနှင့်အတူရုန်းကန်လျှင်ငါအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါဒီမှာရှိနေတယ်၊ ​​၈ ရက် 'အို' မရှိရင်ငါ PMO လို့ပြောရင်ကောင်းမှာပဲငါအကြိမ်အနည်းငယ်နီးကပ်လာပေမယ့်အာဏာအချို့နဲ့အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ကြည့်တာကကြည့်ရတာကျေနပ်စရာကောင်းတာကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်ထက်ပိုကြည့်တာကပိုကောင်းတယ်။ သို့သော်၊ ငါအကုန်လုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ငါသိတယ်၊ ငါ ၈ ရက်လုပ်နေတယ်။ ငါ ၁၂ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်ထိခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရငါအရှည်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ် (အခုအသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ) ။
ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောနေ့ရက်များကျောင်းပြန်စလာသည်။ နေ့စဉ်အားကစားသတင်းစာကို ၀ ယ်ရန်အလှည့်ကျလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီကနေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲကိုရောက်သွားတယ်။ အဲဒီနောက် VHS တိပ်ခွေအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ Channel5မှာ 'erotic thrillers' ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့တီဗီလမ်းညွှန်ကိုအပတ်တိုင်း scan ဖတ်တာမှတ်မိတယ်၊ အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော့်မိဘတွေမသိဘဲအသံဖမ်းစက်ကိုတပ်ထားတယ်၊ ပြီးတော့နံနက်ယံမှာခိုးထွက်ပြီးအကောင်းဆုံးအပိုင်းတွေဆီအမြန်သွားမယ်။ ဟားဟားမရှိဘူး) ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်လာတယ်။ မကြာခင်ငါဓာတ်ပုံတွေကြည့်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ 30 စက္ကန့်ဗီဒီယိုကလစ် ၃၀၊ ဒီတော့ကလစ်တွေပိုကြာတယ်၊ အရည်အသွေးကလည်းပိုကောင်းလာပြီ။ ဒီမှာဒီနေ့ခေတ်မှာ HD hardcore porn ကိုချက်ချင်း steaming လုပ်နေတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီညစ်ညမ်းမှုအားလုံးကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်နေ့အကြိမ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့မှန်းကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး။ ငါကြီးထွားလာနေတုန်းမှာအရမ်းရှက်နေတုန်းမှာသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ရှိပေမယ့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေပြင်းထန်ပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ အများကြီးကစိတ်ဝင်စားမှုပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကနေနုတ်ထွက်လိုက်တယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemsနာများကိုမေ့ပျောက်ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးသောက်ရန် PMO ကိုမည်သို့အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တွေ့နိုင်သည်။ ဤသံသရာသည်ကျောင်းမှကောလိပ်၊ ထို့နောက်တက္ကသိုလ်သို့ပါ ၀ င်သည်။ PMO ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော် PMO သည်ဤပြissuesနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲဘယ်တော့မှမစဉ်းစားပါ။ ငါအဲဒီအချိန်ကငါ့ရဲ့အခြေအနေကိုပိုပြီးသတိပြုမိခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတာတကယ်ဝမ်းနည်းမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘဝပဲ။
ငါ ED လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးပြုခဲ့ချိန်တွင်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အရက်ကိုအလွန်အကံျွသောက်ခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါအစောင့်အကြပ်၊ အအေးမိကျောက်တုံးကိုတွေ့ပြီး ED နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်။ ပြီးတော့ငါမှာပြissueနာရှိနေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ သူမနှင့်အတူနေစဉ်ငါစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များကိုမက်မက်မည်ဟုတွေးနေမိသည်။ ငါစွဲလမ်းနိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမ ဦး ဆုံး link ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်။
ငါမကြာခင်မှာပဲငါ PMO မပါဘဲရက်အနည်းငယ်အဘို့အသွားလျှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာများစွာဖြစ်ပျက်မယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်လာတယ် ကျွန်မရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေတိုးတက်လာမယ်၊ စွမ်းအင်တွေပိုရလာမယ်၊ ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာတယ် (ဒီဟာကအကြီးမားဆုံးအရာပဲ)၊ အရေပြား၊ မျက်လုံးတွေ၊ ဆံပင်အခြေအနေတွေအားလုံးကောင်းလာတယ်၊ ငါ PMO အစည်းအဝေးများအတန်ငယ်ကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ထင်, ဒီခဏမှနောက်ဆုံးပေါ်, ထို့နောက်ငါမကြာမီပြန်နေ့စဉ်လုပ်နေတာပြန်သံသရာဟောင်းသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်ဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်၊ အဲဒီထဲကို ၀ င်ရောက်ပြီးလူတွေအကြောင်းအတူတူပြောနေတာကိုကြားရတော့အံ့သြသွားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလှည်းကိုပြန်သွားပြီးတစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်အထိ၊ ပြီးတော့ ၄ ရက်တကြိမ်လောက်ကိုကန့်သတ်တယ်။ ၄ ရက်တာကငါလိုချင်တဲ့နေရာကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာရပ်နားလိုက်မယ်၊ ပြီးရင်စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စတွေ့တုန်းကခံစားမှုအသစ်ပြန်ရလာမယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ porn ကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ၊ ငါမှာကောင်မလေးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး၊ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါဟာပုံသဏ္inာန်ကောင်းတယ်၊ ငါအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ငါ့ကောင်လေးတွေကိုပြောတယ်။ ငါ PMO အရာတစ်ခုလုံးကငါ့ကိုဘဝမှာတကယ်ချုပ်ကိုင်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သို့သော်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်တစ်နေ့လုံးအိမ်တွင်အလုပ်လုပ်နေရသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကားချပ်သာကွာခြားသည်။
ဒီဟာက ၈ ရက်ပါ။ ကျွန်တော်မလုပ်ခင်ကအရှည်ဆုံးက ၆ ရက်ဖြစ်ပြီး ၁၅ နှစ်အတွင်းမှာပါ။ ယခုအထိသတိပြုမိသောရလဒ်များသည်စွမ်းအင်များစွာသာဖြစ်သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအသံ၊ ဆံပင်၊ အရေပြား၊ ၂ ပတ်ကြာမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး။
ကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း - လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ကွတ်ကီးများလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိဂျာနယ်
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ၊ အလုပ်တစ်ခုရှိသည်၊ တစ်ကိုယ်ရေဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်သာပေါင်းသင်းခဲ့သည် (ဒုတိယအခြေခံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်) ။ ငါ့အတွက် 😢
ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအသက်သည် (၁၀) နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်အမေ၏အဝတ်အစားများကတ်တလောက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအတွင်းခံအဝတ်အစားကဏ္ very ကိုအရမ်းစိတ် ၀ င်စားမိကြောင်း၊ နှစ်အတော်ကြာအလုပ်များနေခဲ့သည်။
ငါ 12 နှစ်အရွယ်မှာ porn ကိုကြည့်စတင်ခဲ့ပြီးကျနော်တို့ဆဲ 56K modem ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ (? Eh အဆိုပါ merrier ပို) လိင်တူချစ်သူဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာချိတ်ဆက်တယ်ငါအစီအရီထပ်မံနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့သစ်ကိုပူပစ္စည်းပစ္စယတစ် neverending မြစ်ရှိခဲ့သည်ဘရော့ဘန်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ။ ငါတကယ်ရွံရှာဘွယ်ပစ္စည်းပစ္စယသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အမြဲလိင်တူချစ်သူပျော့ porn / တစ်ကိုယ်တော် prefered ဘူး။
ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီညာဘက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ဘာမှလျှင်အစဉ်မပြတ်ငါ browsing အတွက်ထားရှိမည်ကြောင့်နက်ရှိုင်းစွာချသိတယ်နီးပါးတူသော, ငါ့ဆယ်ကျော်သက်စဉ်အတွင်းကျွန်မဓါတ်ပုံတွေကို / ဗီဒီယိုများသိုလှောင်ဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်အမြဲခဏအကြာတွင်ထိုသူတို့ဖျက်ပစ်။ ငါကအနည်းဆုံး2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ယခုနှစ်နေ့တိုင်း masturbated, ဒါပေမယ့်တစ်နေ့လျှင်5ကြိမ်အထိအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဖြစ်အများအပြားကြောင်းခန့်မှန်းကြသည်။ အရမ်းရှက်တတ်ခဲ့ပင်ရည်းစားရရန်ကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှ, ငါကအရမ်းခဲမိန်းမတို့အားမိနျ့တျောမူ၏။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၀ ရောက်သော်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အသင်း ၀ င်ခြင်းအတွက်ငွေစတင်ခဲ့သည်။ ဇာတိပကတိအလင်း (စမ်းသပ်မှု) ကိုဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါအခြေခံအားဖြင့်အလွန်အပူတပြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျနှင့်အထီးကျန်ဤအချက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တွင်ခိုင်မာသောစိတ်ကူးရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သည့်အခါကမျှမဖြတ်သန်းခဲ့ပါ၊ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါကအဆုံးစွန်သောလက်ခံမှုဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲမှုကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းပါ။
နောက်ဆုံးမှာလိင်ကစားစရာတွေနဲ့အသင်း ၀ င်မှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးပုံမှန် porn ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောလူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးအပြုအမူများကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးမည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောခဲ့ပါ။ ငါအိမ်မှာတည်းခိုပြီးစျေးဝယ်ထွက်တာ၊ ၂ နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ရတာမှလွဲလို့အိမ်ကနေမထွက်ခဲ့ဘူး။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီးဘာလုပ်လုပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့တယ်။ ဘဝဟာမှေးမှိန်၊ စိတ်ဝင်စားစရာမရှိ၊ အဓိပ္ပာယ်လည်းကင်းမဲ့နေသည်။ ငါအရမ်းရှက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားပြီးလူသစ်တွေနဲ့စကားမပြောချင်တော့ဘူး၊ မိန်းမတွေနဲ့စကားပြောရတာအရမ်းခက်တယ်။
အကြှနျုပျ၏နံနက်စိုက်ထူလည်းယခုလွန်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေသောအခါငါသာ 60% စိုက်ထူလက်ခံရရှိ, ဤငါကတက်ရဖို့များနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတိုဘယ်တော့မှနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနေသေးတယ်ကတည်းကငါ့အစိတ်ကျရောဂါပင်ပိုပြီးတိုးမြှင့်စေခြင်း, ရန်ခဲ့ကြသည် ငါ (/ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစောင့်ကြည့်တစ်နေ့လျှင်ပျှမ်းမျှ 1-2 နာရီပေါ်ကုန်) ပို. ပင် porn ကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်။ ထိုသို့ငါသည်မဆိုသိသာဆုံးကိုဘဲအပျက်သဘောဆောင်သောလိမ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာသိပ်အဓိပ္ပာယ်လုပ်! ဤတွင်ကျွန်မနောက်ဆုံးတော့ motvation ငါ၏မရှိခြင်း, အရာအားလုံးလူတိုင်းဆီသို့ငါ၏အလျစ်လျူ, ငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ငါ့အထီးကျန်, အကြှနျုပျ၏ ED နှင့်မဆိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလမ်းအတွက်မိန်းမတို့အားစကားပြောဆိုရန်ငါ၏အနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြထားကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစကရှင်းပြခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့် ငါ့မှာရည်းစားမရှိဘူး
ဒါဟာငါ့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ် ပေး. , ငါရုတ်တရက်ငါတကယ်ဖြစ်လိုနဲ့ကျွန်မ PMO လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လမ်းကြောင်းကိုအထဲကသတ်မှတ်ထားတဲ့သူသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်စုံလေ၏။
တောက်ပတဲ့ဘက်မှာ၊ ငါ၌ပြaနာတစ်ခုရှိပြီးငါဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ငါသည်လည်းလူတို့နှင့်ပိုမိုစကားပြောခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာစုရုံးမှုအနည်းငယ်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခြင်း (ငါသူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီးနောက်) သည်။ ဘဝသည်အစောပိုင်းကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ PMO အဖြစ်အပျက်များကို ၃ ရက်တစ်ကြိမ်တခါမျှလျှော့ချနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ဓာတ်များရှိလာပြီးကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုအနည်းငယ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ) ။ ငါအရမ်းရှက်တတ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတုန်းပဲ၊ ဒါဆိုငါလုပ်ရတော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ ငါသည်လည်းယခုအားကစားခန်းမကိုလာပြီးငါ့ကြွက်သားများကြီးထွားလာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။
အခုအနုတ်လက္ခဏာကိုငါလုံးဝမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ သွေးထွက်သံယိုငရဲ! ငါဒီအကြောင်းစဖတ်ပြီးကတည်းက PMO ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အသည်းအသန်ကြိုးစားနေပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာအမြဲတမ်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုသိပ်ချုပ်ကိုင်ထားတာပဲ၊ ငါလုံးဝရပ်တန့်နိုင်ရင်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရလဒ်အသစ်တွေကိုငါတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိလို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိမှတ်တမ်းမှာ ၅ ရက်မျှသာဖြစ်သော်လည်းယခုကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားအလွန်အမင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေသည်။ ဤဂျာနယ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်ကိုအတူတကွစုဆောင်းပြီးကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စေ့ဆော်မှု၏နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဤသည်မှာဤမျှလောက်အချိန်ပေးပြီးရေးသားခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်
၁။ ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုလုံးလုံးလျားလျားပျောက်ကင်းအောင်ကုသပါ။
2: နောက်တဖန်အမြိုးသမီးမြားဆွဲဆောင်မှုရှာဖွေအဖြစ်ပိုပြီးလိင်တစ်ဦးနည်းလမ်းများထက်သူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ငါ့ဦးနှောက် Rewire ။ ငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျချင်!
၄။ ဘဝကိုအပြည့်အဝအသက်ရှင်နိုင်ပြီးသာသာသာနှင့်ရောင့်ရဲခြင်းမပြုပါနှင့်။ PMO ကကျွန်တော့်ဘဝကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုဖို့တားဆီးနေပြီဆိုတာအခုသေချာပြီ။
ငါ Porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအဘို့အကြှနျုပျ၏မကြာသေးမီပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်ထင်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်ငယ်ငယ်ကတည်းကတစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်များစွာ MB'ed ရှိသည်။
ငါအွန်လိုင်းမှ Porn-tube လိုင်းများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်လာတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့သားအိပ်ပျော်ပြီးတဲ့နောက်နေ့တိုင်း၊ ညနေခင်းမှာတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်အသံလွှင့်တာတွေလုပ်နေတယ်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးမောင်နှံနှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲမည်ဟုမထင်ပါ။
အခြားညတွင်သူမကကျွန်ုပ်အား lube သုံး၍ အလုပ်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ခံစားခဲ့ရသော်လည်းငါကြိုးစားသောအခါငါမခက်ခဲ့ပါ။ ငါနောက်ဆုံးတော့ဒီကို googled ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် Porn / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်ဟုသံသယရှိခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကလူဆိုးဂိုဏ်းဂိုဏ်းများ၊ မျက်နှာများ၊ dp များ၊ မိန်းမများမျှဝေခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့လိင်စသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်အားတွန်းအားပေးနေသည်။
ငါမကြာသေးမီကမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူမကိုသူမကဲ့သို့အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ခေါင်းပေးသည်ဟုမထင်မချင်းအပြင်းအထန်မရခဲ့ပါ။ ဒါတွေအားလုံးကငါနေမကောင်းဖြစ်နေပြီ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဘဝအတွက်ရှက်ရွံ့ဖွယ်ရာဖြစ်လာပြီး MBing ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်လောက်သာရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကငါ့ကို desensitized ကြောင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြတ်တော့မယ်။
ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ကတည်းကအသက် ၄၀ ကျော်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ ငါရည်းစားရှိခဲ့သောအခါငါနေဆဲလုပ်လိမ့်မယ်။ အိပ်ပျော်ကျသွားငါ့အိပ်ရာများတွင်တင်သောနေချိန်မှာကိုယ့်အကြောင်းကိုညစဉ်ညတိုင်း M ကများ၏အလေ့အထသို့ရတယ်။ ငါသတ်ဖြတ် $$$ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာတဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသတ်ဖြတ်မှာအောင်ခဲ့ပါတယ် 2000 တွင်အွန်လိုင်း porn ရောင်းတော့တာပဲ။ အခမဲ့ porn များအတွက်အဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောမုန်တိုင်းတစ်ခုက M စှဲလမျးသူနှင့် PMO fiend ကိုမြင်၏။
ငါစိုက်ထူနှင့်အတူအခက်အခဲရှိခြင်းကြောင့်ငါ ED ရှိခြင်းထင်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်ငါအဘယ်သူမျှမပြဿနာသူမ၏နှင့်အတူဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်တစ်ဦးစိုက်ထူမရနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါသည်ငါ့ ED လက္ခဏာတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပွုတျောမူသောတလျှောက်ငါ့ကိုကူညီပေးဖို့ကောင်တာထုတ်ကုန်ကျော်ယူပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ပင်စိုစွတ်သောအဆိုပါဒေါက်တာရန်ငါနှင့်ငါ့ ED ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သူ့ကိုပြောပြသည်ပေမယ့်ငါ porn အများကြီးကြည့်ရှုဘာသာရေးအရချွတ်လူရှုပ်သူ့ကိုမပြောခဲ့ပါဘူး။ သူကကျွန်မကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအပြည့်အဝဘက်ထရီ ပေး. ဘာမျှမတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာငါကပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသိပေမယ့်ကိုယ့်ကအကြောင်းငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါ့မှာနောက်ထပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ငါ PMO ကိုဆက်ပြီးငါဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။
ရပ်တန့်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအရာမှာသင်၏ PMO နှင့်ပြaနာရှိနေသည်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများကဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကပြproblemနာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ဟာမင်းတို့သောက်နေကျဒါမှမဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်နေရင်ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်သူမှသင့်ကိုမတိုက်နိုင်ဘူး။
ငါလှည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာအပေါ်နှင့် off ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဖိုရမ်ကိုမတွေ့ခင်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ငါလုပ်နေတာမှာတော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရှားခြင်းကကျွန်ုပ်၏အပြုအမူကိုများစွာလျော့နည်းစေသည်။
ငါကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့ M ဟာလိင်စိတ်နိုးထစေတာကိုစိတ်ရှုပ်စေတယ်။ ငါဒီထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရရန်လိုအပ်သည်တဲ့အချက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်ရသောအခါကျွန်ုပ်သည် PMO မှကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာသည့်အခက်အခဲများကိုမကြုံတွေ့ချင်ပါ။
ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဒီ site ပေါ်တွင်ရာပေါင်းများစွာ post ကိုဖတ်နေခဲ့ကြသည်။ ငါကဒီမှာတခြားသူတွေနဲ့အတူတူပါပဲ;
၂၅ နှစ်၊ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည် ED ကိုတစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဖူးသော ၄ နှစ်တာကာလအတွင်းဆက်ဆံရေးမှထွက်လာခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းကိုပြန်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခက်ခဲသောစိုက်ထူမှုများနှင့်ခက်ခဲရန်ခက်ခဲသောအချိန်များရှိခဲ့ပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ။ အနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုပုန်းအောင်းနေခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာအစွန်းရောက်အရာတွေကိုပိုပိုပြီးရှာဖွေခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်ကငါတစ်ချိန်က P. ကိုတစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဆက်ဆံရေးမှာရှိတုန်းကငါ PMO ကိုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ နေ့တိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်မမှတ်မိဘူး၊
သို့သော်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးနွေရာသီတစ်လျှောက်တွင်အလွန်ပူပြင်း။ ချိုမြိန်သောမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါစိုက်ထူမထားနိုင်ဘူးမှလွဲ။ အရာအားလုံးစုံလင်သောသွားလေ၏။ အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး၎င်းကဲ့သို့သောအရာများကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းထိုအခါငါသတိပြုမိလာသည်။
1; ငါ masturbated သောအခါငါငါ့လက်ျာလက်နှင့်အတူစစ်မှန်သောခက်ခဲဆုပ်
3; ငါသည်ငါ့ arousal တက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာဗီဒီယိုများလိုအပ်
4; porn ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးအပေါ်အစဉ်အမြဲခဲ့, ကျောင်းအတွက်, အလုပ်၌ငါအိပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ, etc
7; ငါအိမ်ပြန်တစ်ခုလက်ပတ်နာရီ porn ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
ဟာလေလုယ, ငါတစ်ခုခုပဲထ ****** ဖို့ပဲသဘောပေါက်! ငါသစ်သားပေါ်ယခု မှစ. porn နှင့်အတွေးငါ့ 65 GB ကိုဖျက်ပစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ငါခဏပိတ်ထားနေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တစ်ခုသာရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါပြွန်-က်ဘ်ဆိုက်များနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ blocker installed, ဒါပေမယ့်သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအရာဝန်းကျင်အရတုန်းပဲလွယ်ကူပါတယ်။
ငါ2တစ်လသို့မဟုတ်ဒီတော့အဘို့နှင့်ငါတကယ်ထွက် freaked တယ်ဒီအချိန်ကာလအတွင်းဤကဲ့သို့သောထားရှိမည်။ ငါတော့ဘူးရိုးရှင်းစွာ horny မဟုတ်ခဲ့သမျှမှားယွင်းနေသလိုခံစားရတယ်။ ငါသည်ဤဒါပေါ်တူကျောပုံမှန်နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယကိုသွားဘယ်တော့မှနောက်တဖန်တစ်ကပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှနှင့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယစတင်ခဲ့သည်။ ဦးနှောက်အာရုံကြောအားလုံးအချိန်ကို! ခံစားချက်ပြင်းထန်သောလေတစ်ခုအခါတိုင်းကိုယ့်ကိုဆင်းရှိအရာနေဆဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသက်သေပြဖို့နောက်ကျော P ကိုမှတွားလိမ့်မယ်! ငါပင်ငါပြီးပြည့်စုံအားလျော့ **** အတူ ejaculated ဘယ်မှာနိမ့်တယ်!
ထိုအခါငါဒီ site ကိုတွေ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်ကယ်ဆယ်ရေး! တူညီသောလှေများတွင်အခြားသူများရဲ့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းငါ့ကိုနည်းနည်းအနားယူ လုပ်. ကြောင့်ရှေ့ဆက်အလင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရန်ပထမဦးဆုံးညဦးယံ မှစ. ကောင်းသောခံစားခဲ့ရ!
ယခုငါတဦးတည်းတစ်ပတ် PMO အခမဲ့ပါပြီ! ထိုသို့လိုက်တယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားရ၏။ ဒါကြောင့်ဝေးငါ့အတှေ့အကွုံမြား:
ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး အကြောင်းစဉ်းစားလျှင်ငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူရနိုင်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုစောင့်ကြည့်ရုံတင်မကဘူး၊ ငါချိန်းတွေ့ရန်အလားအလာရှိသောမိန်းကလေးများကိုစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပြီးကျွန်ုပ်၏တစ်နေ့တာ၏စိတ်ကူးများကိုသာမန်လိင်ဖြင့်သာကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဒါဟာရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါယေဘုယျအားပိုကောင်းလဲလျက်နေ၏။ ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏မိမိကိုယ်ကိုအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့အကောင်းခံစားရ၏။
1) porn ကနေဝေးနေပါ။ သငျသညျရုတ်တရက်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌ porn ရှိပါက, ထို့နောက်သင်၏ခေါင်းကိုချွတ်ထုတ်ပစ်။ အဖန်ဖန်။ ဒါဟာရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
* စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခြင်းကိုမကြောက်ပါနှင့်။ သူတို့က IMO ဆိုတာမင်းကုသပေးတာကိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။
သငျသညျ masturbate လိုပါက * ထို့နောက်ထိုသို့ပြုကြ၏။ သို့သော် 2-3 ကြိမ်တစ်ပါတ်ကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ပုံမှန်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်သာမန်မိန်းကလေးတွေစဉ်းစားပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းတဦးတည်းအစောပိုင်းကသင်လမ်းပေါ်မှာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုအဘို့အော်ဟစ်သော်လည်း M ကတစ်စက္ကန့်လှည့်လည်သွားဘယ်တော့မှမ!
* သင်ကနည်းလမ်းအသစ်လုပ်ရန်ကြိုးစားပြီးတော့, masturbate ဘူးဆိုရင်။ ဒီတစ်ခါလည်းဆန့်ကျင်ဘက်လက်နှင့်သာအလင်းထိတွေ့အသုံးပြုပါ။ သငျသညျပင်၎င်း၏ဂုဏ်နသင်သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရှိသောနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်မည်သို့ခံစားဖို့အသုံးပြုရအပေါ်တစ်ဦးကွန်ဒုံးထားရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ။
သင်ဆေးလိပ်သောက်နေလျှင် * ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ့်စုစုပေါင်းအစားကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ သိပ်အများကြီးအပြောင်းအလဲများကိုအများကြီးမှဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့အလားအလာအများအပြားအရာရာ၌ပျက်ကွက်၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းကိုမှန်ကန်ခက်ခဲသငျသညျ hit ပေလိမ့်မည်။
* အရက်လည်းအလားတူပင်။ အဲဒါကိုနည်းနည်းလေးကန့်သတ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သေချာပါတယ်မနာပါဘူး
* ထွက်သွားဘီယာသောက်ပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ပါ။ မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောပါ၊ ပြုံးပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ၊ နောက်မှဖြစ်မည်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။
4) သငျသညျအိမ်မှာအတူနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး get ပြုပါသို့မဟုတ်သင်သူမ၏ရာအရပျမှာတက်အဆုံးသတ်လျှင်, အပန်းဖြေ!
* မထနိုင်ရင်နောက်ထပ်တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမမြန်စေနှင့်။
* အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေးကသင့်ကိုစိတ်ပူစေလျှင်၊ သင်စောင့်ဆိုင်းလိုကြောင်းသူမ၏ကိုပြောပါ။ နောက်ဆုံးတွင်မိန်းကလေးအများစုသည်လိင်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သို့သော်မိန်းကလေးများစွာသည်ယောက်ျားလေးများကိုကျေနပ်စေရန်ပထမဆုံးရက်များတွင်လိင်ဆက်ဆံနေကြသည်။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးမှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်အရူးကမ္ဘာဖြစ်သည်
* သူမလူအပေါင်းတို့သည်အချိန် sexy ခံစားရသေချာအောင်လုပ်ပါ, သူ့ကြောင့်ပြောပြရန်သေချာပါစေ။ ဒီတစ်ခါလည်းနောက်ကျအချို့ကိုသင် erectile ပြဿနာများရှိခဲ့ခြင်းနှင့်သင်အချိန်နှင့်အတူသူတို့အပေါ်မှာရလိမ့်မည်ဟုသေချာကြောင်းကြောင်းကိုထည့်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချမှု, sexy ဖြစ်ပြီးသူမအရှိဆုံးဖွယ်ရှိလေးစားမှုဒီလိမ့်မည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်သင်၏အနည်းနည်းပြဿနာအပေါ်ကိုသင်ကူညီပေးသည်။
* အကယ်၍ မိန်းကလေးအသစ်ဖြစ်ပါကညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏အားမပြောပါနှင့်။ ဒါကကိုယ့်အစအ ဦး ၌သူမ၏အဘို့ creepy အသံလိမ့်မယ်။ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသန့်ရှင်းရေးသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
5) အကျဥ်းရုံးသည်။ IMO နှင့်ငါ့အဘို့အနည်းဆုံးငါ porn ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် porn တစ်ခုတည်းသောပြဿနာမှာ IS သေချာဖြစ်၏။ ဒါဟာငါ့အဦးနှောက်အထိလွဲချော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါပြန်ပုံမှန်ရဘို့ကဖြစ်နိုင်သေချာဖြစ်၏။
ငါ masturbate လျှင်မကောင်းတဲ့ခံစားရရန်ရှိသည်ဘယ်မှာနေတဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်နေထိုင်မည်မဟုတ်။ ဒါဟာ masturbate မှပုံမှန် ******* သည်နှင့်အခြားလူတိုင်းကပါဘူး။ သို့သော်သူတို့ကကွဲပြားခြားနားကျနော်တို့ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်သည်ထက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြီးကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောမဟုတျပါ!
ပြောခဲ့သလိုပဲ PMO မပါပဲတစ်ပတ်လောက်ကြာပြီ။ ငါဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်၊ ငါ P. P. ကိုပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် M မရှိဘဲရက်ပေါင်း ၆၀ လုံးလုံးလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး🙂
ဒီမှာရက်ပေါင်း ၆၀ နံပါတ်တွေအများကြီးကြားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမရဘူး။ အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီဆိုတာလူတစ်ယောက်ဘယ်တော့သိမှာလဲ။ အကယ်၍ သင့်အားစစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခွင့်ကိုသာခွင့်ပြုပါကထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရေဘဝဖြင့်နေထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ
ငါအခုဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအသက်ရှင်နေပြီ။ လိင်ဘယ်တော့မှမပျော်ဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ငါဖတ်ခဲ့တဲ့အရာကနေစွဲလမ်းမှုဟာငါခံစားလိုက်ရတာထက်အများကြီးပိုအားကောင်းနေပုံရတယ်။ ငါအလွယ်တကူရက်အနည်းငယ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသွားနိုင်ကြောင်းနှင့်ငါ့အတန်ဖိုးရှိရှိဘဝ၏လမ်းအတွက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ ငါမူကား porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သာအော်ဂဇင်ပြုနိုင်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာလိင်အတွေ့အကြုံ (၃) ခုပဲရှိခဲ့တယ်။ အသက် (၁၆) နှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ သူက“ တစ်ညအိပ်ရပ်တည်ခြင်း” ဖြစ်ပြီးသူမသည်သူမနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ဖိအားကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကရိုးရိုးလေးပဲ။ ဘာမှလည်းမပျော်ဘူး။ ဒုတိယအကြိမ်မှာကျွန်ုပ်အသက် ၁၈ နှစ်တွင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့သည်။ တနည်းကား, နောက်ထပ်ရွားလှအတွေ့အကြုံကို။ ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်ရွံရှာဖွယ်ခံစားခဲ့ရသည်။
ဒီဟာတွေကိုငါစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုမနှစ်သက်ခဲ့ဘူး၊ ငါလည်းဒီဇုံထဲမှာရှိနေပြီးသေချာမသိဘူး။ ထိုအရာများထဲမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုအတွက်ဆုလာဘ်အခိုက်အတန့်မျှမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် porn သည်ကျွန်ုပ်သည်သဘာဝလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟူသောအတွေးနှင့်ကျွန်တော် ဆက်၍ စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမူကားငါကောင်းတဲ့နှင့်လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ရက်စွဲများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါမကြိုက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတကယ်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောရရင်တော့လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်ငြီးငွေ့လာတယ်၊ ပျင်းလာပြီး ~ ၄၀ မိနစ် (ပထမဆုံးအကြိမ်) နဲ့ ၂ နာရီနီးပါး (နောက်ဆုံးအကြိမ်) အပြီးစိုက်ထူမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။
အကယ်၍သာ ကျွန်ုပ်သည်သာလိင်မှုကိစ္စမနှစ်သက်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုစောင့်စားပြီးလိင်ခြားသူနှင့်ဆက်ဆံမိလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဇီဇာကြောင်သူဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းသာလျှင်သေချာပေါက်အဆုံးသတ်တော့မည်ဟုမထင်ပါ။ ။
ဒါကြောင့်ငါ (ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ကတည်းက) porn ဖြတ်တောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဒီ rebooting အရာအကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါ။ ငါသာလျှင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကောင်းကောင်း ဖြတ်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပုံစံကိုချိုးဖျက်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်း ဦး နှောက်ကိုနားလည်စေမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ ၇ ရက်ကြာညစ်ညမ်းကင်းစင်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တနင်္လာနေ့ (ငါစတင်နှစ်ရက်ပြီးနောက်) ခဲ့ပေမယ့်ငါအော်ဂဇင်ဘူး။ ဒုတိယတစ်ခုမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂ + ၂) ဖြစ်ပြီး ၁ နာရီခွဲအကြာတွင်ငါပြောခဲ့သောထိုမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်အတူရှိခဲ့သောညအကြောင်းကိုသာစဉ်းစားခဲ့သည်။ ထိုအမနေ့ကငါဖြစ်စဉ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲ။
အခုတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်သေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီနေ့ ၁၀၀ ကိုအခမဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ရိုက်နှက်မှုကိုငါပြုတော့မယ်။ ငါဒီနေ့အထိကောင်တာကိုပြန်လည်စတင်တော့မယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဤဖိုရမ်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်ပါ၊ အားလုံးတွေ့ရန်ကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်းကသူတို့ ED ကိုကျော်တက်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ ED ရှိမယ်၊ ချက်ချင်းရမယ်။ ကျွန်မဤအရပ်မှငါသည်ပြဿနာ porn ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဈ porn ကိုကြည့်ပါလျှင်သို့သော်ကျွန်မချက်ချင်းစိုက်ထူရကနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲနေထိုင်မည်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးစိုက်ထူထိန်းသိမ်းရန်လို့မရပါဘူး။ အသက် ၂၀ ရှိ၍၊ pussy ပြည့်နေသောတက္ကသိုလ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် fuck ဆိုတဲ့ရုံမျှသာဖြစ်သည်။ သို့သော်မတတ်နိုင်ပါ။ အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ငါလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်, ထွက်သွားနှင့်အဖြစ်အများကြီးရောနှောကဲ့သို့မခံစားရဘူး။
ငါသို့သော်ကိုယ့် porn မှာရှာဖွေနေမှတဆင့်စိုက်ထူဖွစျလာနိုငျသောအမှန်စင်စစ်ငါ့ကိုကိုယ်ထိလက်ရောက် Im ကျန်းမာယုံကြည်စေသည်ပေါင်းငါရကြဘူး, ငါနောက်တဖန် check လုပ်ထားတော်မူပြီးမှငါပေးသော, ငါ့ prolactin ED ဖြစ်စေနိုင်သည့်မြင့်မားသည်ကိုလည်းဆရာဝန်များကတက် check လုပ်ထားပြီ ဘာမှမမှား၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်ရသောအားနည်းနံနက်စိုက်ထူ။
ပညာရေး + အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်? မည်သူမဆိုတူညီသောလှေခဲ့?
ဒီတော့ခေါင်းစဉ်ပြည်နယ်များအဖြစ်။ ငါ ED နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်နှစ်ဦးစလုံးထံမှခံရပုံရသည်။ ငါစိုက်ထူပြီးတာနဲ့ငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူစတင်ရန်စတင်သောအခါငါ (10-15 စက္ကန့်ကဲ့သို့) အလွန်လျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်လိမ့်မယ်။ ငါ ED ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် nofap wagon ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာဘူး။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အိပ်ရာဝင်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အိပ်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးပြီးစီးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ငါထင်တာကမိန်းကလေးတစ် ဦး နဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းဟာအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ မည်သူမဆိုဒီမှတဆင့်ခဲ့သလား ငါအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှစိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးသွားမည်ကိုသိပြီး မှလွဲ၍ မည်သည့်အကြံဥာဏ်မျိုးမဆို။
အသက် WTF 37 ကဒီမှာပေါ်သွား !! ??
OK ကိုနိုင်အောင်ကဒီမှာထိပ်တန်းကနေအောက်ခြေငါ့အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 37 နှစ်အရွယ်တစ်ဗူးတစ်ရက်သောက်ကြောင်းယောက်ျားနှင့်အချိုရည်အများဆုံးနင်္ဂနွေဖြစ်ကြောင်းကို။ ကျွန်ုပ်သည်အတော်အတန်လျောက်ပတ်သောအသွင်သဏ္ဌာန်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏သွေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည်ပြissuesနာများကိုစစ်ဆေးသည်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေစွာပြန်ရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းသည်စုံလင်သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစုံတွဲတစ်တွဲနှိပ်ရုံသာရှိသော်လည်း A-OK ထက် ပို၍ ဖြစ်သည်။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်နေ့တစ်ကြိမ်အင်တာနက် porn အသုံးပြုသူပါပြီ။ ကျွန်ုပ်လက်ကိုပထမဆုံးဆွဲနိုင်သည့်စက္ကူအမျိုးမျိုးရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်လက်များကိုရရှိသောအချိန်ကတည်းကအင်တာနက် porn သည်၎င်း၏နေရာတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ သူမ porn ကိုမုန်းတီးပြီးသူမကိုရပ်တန့်စေလိုသောကြောင့် EX-fiance နှင့်ထိုးနှက်လိုက်သည်။ သူမရဲရဲပြောတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလို့သူမတောင်းဆိုမှုများကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ ဤမိန်းမသည်လှသောအဆင်းနှင့်ပြည့်စုံ။ ၊ ကြီးစွာသောတည်ဆောက်ခြင်းကိုခံရ၏။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခါတလေသူမအတွက်မခက်တော့ဘဲအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုတော့ပါ။
ဤအချိန်အတောအတွင်း (နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းက) ငါအဘယ်သူမျှမပြpornနာမရှိ porn နှင့်အတူခက်ခဲရနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမကူညီနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုငါတကယ်စိတ်ထဲထားခဲ့ပြီ။ ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသံသရာဖြစ်ခြင်းသည်အဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ငါ Cialis များအတွက်ဆေးညွှန်းတယ်နှင့် misc မိန်းကလေးများနှင့်အတူကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်အောင်မြင်သောသွားကြကုန်အံ့၏ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ငါ (ငါ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက) လုံးဝငါနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသောအထွေထွေအမျိုးသမီးများအားအိတ်စွပ်အကြောင်းကိုစူပါ jazz ခဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖူး။ ဒါပေမယ့်အခုငါတကယ်ဂရုစိုက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ဝက်ပါပြီးဘာမှမသွားနိုင်တော့ဘူး ငါဆိုလိုတာကအကောင်းဆုံးပဲ။ ဤရွေ့ကား, အချို့အလွန်လေးလံသောတာဝန် shenanigans ကာလအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ cum လို Pre cum ကိုယိုစိမ့်ပြီးငါ့ကိုသတ်ပစ်တော့မည့်အပြာရောင်ဘောလုံးများရှိသည်။ သို့သော်ငါခက်ခဲပြီးမည်သူမဆိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းစေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ Cialis ကိုနောက်ဆုံး ၂ လအကြာမှာကျွန်မတို့အတူတကွစုဝေးခဲ့ကြတယ်။ ယခုငါလုံးဝထိတ်လန့်တယ်!
Stats ကတော့အထွေထွေ stats:
လိင်: M ကအသက်: 26 ပထမဦးစွာ FAP: 13-1 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်:6(ခန့်မှန်း) ကြိမ်နှုန်း Fapping ။ ED ?: Yup @ 25 ညွှန်း: Cialis 20mg
အိုကေ ... ဒါက ၀ န်ခံတာထက်ပိုပါတယ်။ ဒီ post ကရှည်တယ်၊ ငါဖြစ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာဘယ်သူ့ကိုမှဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်စက်စွာရိုးသားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိမြို့ကြီးကြီးတွင်ကောင်းမွန်သောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၇ တန်းကနေ ၇/၂၉/၂၀၁၂ ထိထိထိရောက်ရောက်မေ့ပစ်လိုက်တာငါရော့ခ်အောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာသိပြီးနောက်မှရောက်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကောလိပ်ချစ်သူနှင့်ဘယ်တော့မှမထနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာမရှိပါ။ ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးနက်တဲ့ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးသည်ဘားတန်းရှိမိန်းကလေးများကိုရိုက်နှက်သောအခါ၊ ၎င်းကိုမဖွင့်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်အမြဲကြောက်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကတဆင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါ ၂၄ နှစ်ဝန်းကျင်ကလေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရခဲ့ပြီးငါစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီးငါဗလာဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်လိုက်တယ်ခံစားမှုရှိ၏ ငါလိုချင်သောကောင်မလေးထက်ပိုသောအရာများရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားသည်ဟုခံစားရသည်။
ငါဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားတယ်။ ငါ Cialis (၂၀ မီလီဂရမ်) ဒေါ်လာရာနဲ့ချီပြီးကုန်သွားတယ်၊ ဒီနေ့အထိငါ“ ကံကောင်းလာရင်” ငါနှင့်အတူသယ်ဆောင်လာသည်။ Cialis သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်း၌အော်ဂဇင်မရရှိနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းအချို့ရှိသည်။ ငါ့အားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏သဘာဝခံစားချက်ကလုံးဝစိတ်ပျက်အားလျော့သွားပြီးထိုအချက်သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ် ဆက်လက်၍ ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာမနှစ်ကဒီအချိန်လောက်မှာပြီးဆုံးသွားတယ်။ ငါမကြာသေးခင်ကမှလိင်မဆက်ဆံခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အမြင်ကမှောင်မိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုသို့ရောက်သွားသလိုမျိုးအဲဒီနှစ်မှာပဲ။ ငါအိပ်ရာမဝင်မီသာမကအိပ်ရာနိုးသောအခါနှင့်တခါတရံတနင်္ဂနွေအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းများကိုပင်မုန်းတီးခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ၊ ငါဟာဒါပဲလို့ငါထင်ခဲ့တာ၊ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်တော့မှပုံမှန်ရင်းနှီးမှုအဆင့်ဘယ်တော့မှရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်၌ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါရှိခဲ့ပြီးသွေးပြန်ကြားစာအပြည့်ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းသည်ဆရာဝန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်အနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးကိုလုပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ငါဒါကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်စပြီးတခါမှာ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုရဲ့ခန်ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုရပ်တန့်သွားစေတဲ့အတွက်အသက်ဆက်ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ (ဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားတွေကဒါဟုတ်သလား။ ) ကျွန်တော့်မှာစုစုပေါင်းနှင့်အခမဲ့ T အဆင့်အတန်းအတိအကျမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်သူ့ကိုမနက်ဖြန်ခေါ်ယူပါ။ ဒီမီ, ငါလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်သဘာဝကြီးထွားဟော်မုန်းအပါအဝင်အချို့သောဖြည့်စွက်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူကငါ့ကိုကြီးထွားဟော်မုန်းဖြည့်စွက်မှုကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အခြေခံကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး ၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
ကံကောင်းတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်ခဲ့တယ်၊ မကြာသေးခင်ကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာငါဟာပိုမိုမြင့်မားတဲ့အကူအညီကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်မရဲ့အဆုံးအဖြတ်အချိန်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့စဉ်ကကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အရက်အလွန်သောက်ကြသော (ဝီစကီနှင့်ဘီယာ) ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ယိုယွင်းနေတဲ့စိုက်ထူမှုကိုအရက်ကိုအလွန်အပြစ်တင်လိုက်သည်။ ငါ 20mg Cialis တစ် ဦး အပြည့်အဝထိုးအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး ငါထွက်ပေါက် freaked, ဒါကြောင့်ငါရေချိုးခန်းမှဆင်ခြေနှင့်အခြား 10mg ယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီး Cialis ဆေး ၃၀ မီလီဂရမ်သောက်ရမည်။ ဤအချိန်၌ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်အရှိန်မြင့်လာသည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မရဲ့ထုံးစံအတိုင်းထင်းထင်းနေပြီးငါတို့ကလိင်ဆက်ဆံတာအကြိမ်အနည်းငယ်ရှိပေမဲ့အော်ဂဇင်မရှိသေးဘူး။ ငါသူမနောက်လာမယ့်အထိငါ PMO မဆုံးဖြတ်ပါ။ ၇ ရက်ကြာသည်။ နောက်ဆုံးနေ့ ၇ ရက်မှာငါတို့ထွက်ပြေးဖို့မျှော်လင့်တယ် ငါကူညီပေမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်ထက်ပိုမဖြစ်နိုင်အောင်ဒီနေ့ညသည်ဖြစ်အံ့သောငှါဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောဒီစဉ်းစားတနေ့လုံးအစွန်း။ မှတ်တမ်းအတွက်တော့ဒါဟာမလွယ်ဘူး၊ အနားစွန်းကဆိုးရွားလှတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါ။ ငါအခြေခံအားဖြင့်တစ်နေ့တာအတွက်ကျွန်တော့် dopamine လမ်းကြောင်းကိုရူးသွပ်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနဲ့အတူကြော်ထားတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ညရောက်လာပြီ။ ငါတို့ဝီစကီနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ကုန်ခံပြီးနောက်တစ်ခါမူးနေပြီ၊ ငါမသောက်နိုင်ရင် Cialis 20mg တောင်မှမသောက်နိုင်တော့ဘူး ငါသည်ဤအချက်မှာဘဝကိုမုန်း၏။ အားလုံးကိုမုန်းတယ်။ ငါလိင်တံထဲမှာလိင်တံဘုရားလာကြတယ်ချင်တယ်။ ဘ ၀ ၏အဓိကကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမပြီးမြောက်နိုင်ခြင်းအတွက်အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်ရှက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောနှလုံးကြေကွဲဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်နံနက်သစ်သားသည်ထလာသော်လည်းအထူးသဖြင့် Cialis ဆေးသောက်ခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းမခိုင်မာပါ။ ဤသူကားငါအောက်ခြေငါ၏အခိုက်ဖြစ်၏။ ငါအိပ်ရာထဲမှာလိင်ဆက်ဆံဖို့တောင်းပန်နေတဲ့ဆိုးညစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ငါကသမ္မာသတိရှိမယ်၊ ငါ Cialis မှာရှိတယ်။ သူကပိုကောင်းလာပြီ။ သူမလိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့လိင်တံကမေ့မြောတဲ့ပြည်နယ်ထဲကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါချောက်ထဲကနေခုန်ချချင်တယ် ငါ Bionic ဒစ်အစားထိုးချင်တယ်။ ငါ PMO ၏ချုပ်နှောင်ထားထဲကချင်တယ်။ သူမသည်ထွက်ခွာသည်။ ငါနောက်ဆုံးတကြိမ် fap ... တစ်ခုတည်းမျက်ရည်ငါ့ပါးပေါ်လှိမ့်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ fap ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယနေ့ညကျွန်ုပ်၏ T level ကို 50mg Zinc နေ့စဉ်ဆေးများဖြင့်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသုတေသနပြုနေပြီ။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှာကျွန်ုပ်၏ T အဆင့်ကို 'ပုံမှန်' အဆင့်သို့တက်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤပြissuesနာများမရှိတော့ကြောင်းသေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အယူအဆသည်ပိုမိုသုတေသနပြုပြီးနောက်အနီရောင်သမင်ဒရယ်ဖြစ်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာနဲ့ ED နဲ့ porn နည်းနည်းထပ်လေ့လာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကို Porn ပေါ်မှာကြည့်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့အရာရာတိုင်းဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ငါမပျောက်ဘူး သက်သေပြလမ်းကြောင်းတစ်မျိုးရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဟာကိုလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ် ကလေးသူငယ်အပြုအမူကိုဘေးဖယ်ထားရုံမျှသာလိုပါကကျွန်ုပ်သည် fuck ဆိုတဲ့ကြီးထွားလာပြီးအမှန်တကယ်မှန်ကန်စွာကြီးထွားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ NoFap ၉၀ ရက်အတွက်စိန်ခေါ်ချက် - ကျွန်ုပ်၏ hosts ဖိုင်တွင် OpenDNS နှင့်အပြာ - ပိတ်ထားသောအိမ်ကွန်ယက်နှင့်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ထားခြင်းကိုယ်တိုင်အော်ဂဇင်မရှိပါ။ မူးယစ်ဆေးမရှိဘူး
ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့ဆက်ပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါလေးနက်သော dopamine လမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟုထင်ရသည်၊ သို့သော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပန်းတိုင်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုဖွင့်သင့်တဲ့အရာတွေကိုပရိုဂရမ်သွင်းဖို့လိုတယ်။ ဒါ့အပြင်သူမကတကယ်ကိုပူပြင်းပြီးသင်လုပ်နိုင်တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီဟာကိုဒီနေရာမှာခြံစည်းရိုးမကျစေဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ Cialis သည် ... ငါခြံစည်းရိုးပေါ်မှာ။ ဒါကကျွန်တော့်အသိပညာအတွက် dopamine receptors ကိုမထိရောက်စေဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကဆက်လုပ်နေမှာပါ၊
နှင့်အညီ, လိင်မတိုင်မီအဘယ်သူမျှမ booze (ငါယခုသော်လည်းလွတ်မြောက်သောဆိတ်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မယ်) ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကအားလုံးကိုထွက်ရတယ် - နောက်ဆုံးတော့။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအသက်ရှင်နေတယ်။ ငါစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်တွေ့ရန်ပျက်ကွက်သည့်နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုကယ်တင်ပြီးရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုစစ်မှန်သောအချစ်ဆုံးအချစ်သို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ။ ဒီနေရာကိုဆက်တင်ထားပါလား။ ဘလော့ဂ်တခုစလုပ်လား။ Tumblr? တွစ်တာလား မီးခိုးအချက်ပြမှုများလား
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော့်ဘ ၀ ရဲ့ခုနစ်နှစ်တာကာလအတွက်အင်တာနက်ခေတ်ကိုရှေ့သို့တိုးစေသောအထောက်အပံ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Porn ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပါ၏ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကို“ ပုံမှန်” သို့မဟုတ်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ကျန်းမာခြင်း” အဖြစ်မသတ်မှတ်မီကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဇာတ်လမ်းသည်ဤသို့မဟုတ်ချေ။
နေ့စဉ်ပုံရသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်နှင့်အတူအနီးဆုံးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းသို့သွားရန်စဉ်းစားခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆွဲတင်ခြင်းနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းတို့ကိုမစဉ်းစားဘဲသာမန်အလုပ်များလုပ်ခြင်းကိုမပျော်တော့ပါ။ ကျွန်တော့်ကောလိပ်စာသင်ခန်းထဲမှာမထိုင်နိုင်၊ မ ၀ တ်နိုင်အောင်မိနစ် ၃၀ ကျော်လောက်မတ်တပ်ရပ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ညမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုအကြောင်းနဲ့ထွက်ပေါက်ထွက်ဖို့မထွက်နိုင်ပုံကိုစဉ်းစားမိတယ်။
ငါလုပ်သောအချိန်တိုင်းမရေမတွက်နိုင်သောနာရီပေါင်းများစွာမှမှန်ကန်သောဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကသုံးကြိမ်မှငါးကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်။ နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနဲ့ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူကိုမကြာသေးခင်ကငါတွေ့ပြီ။ အခုကျွန်တော်တို့စုံတွဲနဲ့ချိန်းတွေ့တာလအနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူထွက်လာရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနှစ်သက်ပြီးမလိုချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ဤလှပသောလူကိုကျွန်ုပ်ရှေ့မှောက်၌ရှိသောကြောင့်၎င်းကိုချက်ချင်းထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချိန်ကိုအပေါ်ယံအနတ္တနှင့်ပေါင်းသင်းပါ။
က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဒါပေမယ့်ငါမလှည့်စားချင်ဘူးတဲ့သူကိုတွေ့တော့ငါ့ခေါင်းကညှို့ယူထားတဲ့အစွဲထဲဝင်သွားတယ်။ ငါတို့မီဒီယာ၊ ကြော်ငြာတွေနဲ့နေ့စဉ်တွေ့ကြုံမှုတွေဟာအများအားဖြင့်အဝတ်အချည်းစည်းပတ်ပတ်လည်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာမှာ၊ ငါ့ကိုတပ်မက်သောသတ္တဝါအချို့ကိုသို့လှည့်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုသတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်အားနည်းနေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုလူတို့သိပြီးငါ့ကိုကြည့်နေသည့်အလားအကြောက်လွန်ရောဂါခံစားနေရသည်။
ငါ reddit အကူအညီလိုတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဒါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပြ,နာတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံလိုက်တယ်။ ဒါဟာပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့တခြားအချက်တွေကြောင့်ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြီးစတင်ခဲ့တယ်။ ငါဟာအကူအညီတောင်းခံဖို့လိုတယ်လို့ခံစားမိရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့မကြာခင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါစိတ်ပျက်သွားမှာပါ။
TL; DR: ငါဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်နာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပြီးဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်။ ဘယ်ကိုသွားရမလဲမသိဘူး
ငါဒီမှာ 10 နှစ်နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပါ
ဟေ့ကောင်တွေ၊ ငါဒီနေ့မနက်မှာကျေးဇူးတော်ကြီးကြီးကြီးကိုပြောချင်တယ်။ ဒီမှာငါ့ဇာတ်လမ်းပါ
ငါ ၈ နှစ်အရွယ်မှာပထမ ဦး ဆုံး porn ကိုပထမဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်။ 'boobs' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဆံပင်ညှပ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ ငါ့ညီနဲ့ငါ boobs (dot) com ကိုသွားတယ်။ ၁၁ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက Kazaa အချိန်တုန်းကငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစပြီးစတင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဟားဟားဟားဟားငါဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတာမယုံဘူး သငျသညျယောက်ျားတွေပင်မှတ်မိ ?? Que မှာညစ်ညမ်းတဲ့အရာ ၂၅-၃၀ လောက်လိုလို download လုပ်တာမှတ်မိသေးတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ပတ်ပတ်လည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားခဲ့ရနဲ့ငါနုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာငါကအနည်းဆုံးသုံးနှစ်အနည်းဆုံးနေ့စဉ်နေ့၌ဖြစ်ရပြီရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကလာမယ့်လ9နှစ်ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ နေ့ကမင်းနုတ်ထွက်တော့မယ်။ ဤအရာသည်အလွန်သေးငယ်သောအရာဖြစ်ပြီးသင်၏စွမ်းအင်ကိုစိတ်ပူရန်ပင်မတန်။ ဒီအချိန်ကိုဆွဲလိုက်ရင်မင်းမနက်ဖြန်ဒီအရာကိုဖြိုခွဲနိုင်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်များလများလာသည်နှင့်နှစ်များကုန်လွန်လာသည်ကိုဝမ်းနည်းစေသည်။
ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီ! ဒါကငါ့ကိုမထိခိုက်စေဘူး။ ငါနုတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ၆၉ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုထူးခြားချက်လဲ၊ HS နေ့လည်စာစားပွဲမှာလူတိုင်းသင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါအရေဖျားလှီးခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဘယ်လောက်လေ့လာမလဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့။ ငါအိမ်လုပ်ဇာတိပကတိအလင်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာကြောင့်အာရုံခံစားမှုမဖြစ်တာလဲ ဒါဟာချွတ် jacking ကဲ့သို့တူညီသောပါပဲ။ ၁၅ စက္ကန့်လောက်ကြာတယ် ဘာလဲ ??
ငါထို့နောက်ငါသည်ဤ SH * T ကပြုမိဖူးဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ပြောပါတယ် ... .. အွန်လိုင်း သွား. ငါ့ကိုလျင်မြန်စွာတွေဆီကနေမှလေ့ကျင့်သင်ကြားနှစ်ပေါင်းများစွာဖမ်းမိရမရရန်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအတွေးနှင့်အတူသမျှသော fapping သဘောပေါက်ငါ 30 ရေရှည်တည်တံ့နိုင် အဆိုပါစုဆောင်းလေ့အကျင့်ကနေယခုအားဖြင့်တစ်နာရီမှ mIN ???
လွန်ခဲ့သော4လမှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်။ ငါ PMO'ing နေဆဲနှင့်တကယ်ကစဉ်အတွင်းတစ် ဦး စိုက်ထူအများကြီးရတဲ့မဟုတ် ... ။ ဒါက weir- ………… .. အို SHIT ။ အဘယ်ကြောင့် F *** ငါ ED ရှိသနည်း WTF လား။ နောက်ဆုံးတော့ Youtube ပေါ်က TED ဟောပြောချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်၊ နှင့်ငါ့အမှုကိုအဘယ်သူမျှမအထူးအချည်းနှီးဖြစ်၏သဘောပေါက် ငါအားလုံးရှာဖွေခဲ့သည် / r / NoFap ငါပုံကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ကိုယ်ပွားသည်အခြားရှာဖွေတာထားရှိမည်။
ငါငါ့အလိုရှိသမျှအလိုတော်တန်ခိုးကုန်, နေ့ 4, ဒီနံနက်နိုး။ ဒါဟာသင်တို့တဘက်၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အလှည့်သဖြင့်, ရယ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး scariest အရာပါပဲ။ နေ့ 1 အပေါ်ဖြတ်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်သမျှသောသင်၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်စွမ်းအင်သင်တို့အပေါ်မှာလှည့်, နေ့နေ့ကား, အဲဒါကိုအတွက်ပေးရသငျသညျစေ့ညှစ်သတ်ခြင်းနှင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ သူကပိတ်ထား rip ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့သောအခါငါ Spiderman အနေဖြင့် Venom နဲ့တူခံစားခဲ့ရပေမယ့်မသွားပါလိမ့်မယ်, သူ့ကိုလောင်လိုသော။ ငါလယ်ပိုင်းသုံးဆယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ၏အသက်တာကိုဖျက်ဆီးရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ကြောင့်ရင့်ကျက်ကောင်လေးရဲ့ post ကိုဖတ်ပါနှင့်အမျှကျွန်မတခါအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့ဤအရာကိုသတ်မယ့်သူဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးသက်တမ်းတိုးလှုံ့ဆျောမှုရတယ်။ ဒီခရီးကတဆင့်ချင်းစီကတခြားငါ့ကိုအားပေးစကားများအတွက်, သငျသညျယောက်ျားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာငါနေ့တိုင်းနိုးထလာသောအခါ4ငါသည်ငါ၏အသစ်ကခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဤသုံးစွဲဖို့သွားမယ်နေ့ကဖွင့်:
ငါသည်အနှစ် ၂၀ ကျော်ကျော်၊ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုယနေ့အချိန်၌သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယနေ့စိတ်ပညာနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာနှင့်သင်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖတ်ရှုသောအခါ၊ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုညစ်ညမ်းမှုအကြောင်းကြေငြာခဲ့တယ်။ ၂ လအကြာမှာငါဟာတကယ်တိုးတက်မှုကိုလုပ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မလွယ်ကူပါ၊ သို့သော် MO ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ငါပြန်သွားတော့, ငါသွားအများစုဟာတစ်ပတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ တခါတရံမှာသူကကျွန်မကိုစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ကိုယ့်ဘဝဟာသိသိသာသာပိုကောင်းလာမယ့်အဆင့်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့တွေးနေပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူပြီးဂုဏ်ယူပါ့မယ်။ ကြိုးစားမှုကိုဆက်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုပဲလို့ထင်ပါတယ်။
ငါ့ဘဝမှာဆက်ဆံရေးအများကြီးမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းကပါးစပ်၊ လက်နဲ့ယောနိတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တောင်ဘယ်တော့မှအထွတ်အထိပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကငါ့အသက်ကောင်လေးအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါမကြာခင်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဤ site ကိုနှစ်သက်သည် - MedHelp
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ငါ့ရုန်းကန်
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ရုန်းကန်ရမှုမည်မျှခက်ခဲကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သောထောက်ခံအားပေးသည့်အင်တာနက်အသိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါကအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်
ငါ၏အညစ်ညမ်းစွဲအလှည့်၌ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုချိုးဖဲ့သော erectile disfunction, နှင့်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ငါစိုက်ထူရလုပျတဲ့အခါမှာငါ့ကိုတစ်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်အဘို့, ကမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်။ ဤသူသည်ငါရှိသည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီဆက်ဆံရေးတခုတခုအပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် strain ကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထွက်ရှာငါ့ကိုအလွန်တွန့်ဆုတ်စေတော်မူပြီ။ အဆိုပါအမြီးအမောက်ငါသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါထဲကချိုးဖျက်ဖို့အပူတပြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်သံသရာပါပဲ။
4 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါကောလိပ်ကျောင်းတစ် freshman ကြီးနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပျက်ကွက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ငါရှက်နှင့်အမျက် ထွက်. , ဒါပေမယ့်ငါအချိန်, isotretinoin မှာယူခဲ့ပါတယ်ဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဝက်ခြံဆေးဖို့ကစွပ်စွဲ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးငါ့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်သုန်မှုန်လုပ်, ငါ့စွမ်းအင်ယုတ်လျော့လေ၏။ ငါဆေးခဲ့စဉ်ကရှိသမျှတို့ကိုငါအလားတူရလဒ်များနှင့်အတူထိုခြောက်လအနည်းငယ်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။
ငါဆေးကုသမှုမှဆင်းလာသောအခါငါအံ့သြသွားတယ်။ ကျွန်မသက်သာခံစားရုံသာမကဘဲအသားအရေကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းရည်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်အနည်းငယ်တုန်ယင်နေသော်လည်း၎င်းသည်တစ်စုံတစ်ရာပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အားရှာဖွေရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရလာခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခု - ငါမအောင်မြင်နိုင်ဘူး
ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ထွက်ရှာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ဆီးရောဂါပါရဂူကိုမြင်တော်မူ၏။ သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်လက်မခံပေ, တစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန်ဖို့ကစွပ်စွဲ။ သူ 19 မှာဒီလေးနက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်င်ဟု, ငါ့အသက်အရွယ်ထောက်ပြသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးကြားလျှင်, ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးတကယ်ငါ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူ messed ကြောင်းပြောကြသည်။ "ကျွန်တော်ဘာမှားလို့လဲ? ငါကျိုးပဲ့ Am? "
ဒါကြောင့်ငါသည်ဤကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သံသရာနှင့်အတူ3ပိုပြီးနှစ်ပေါင်းဆက်ပြောသည်။ ငါသာပျက်ကွက်ရှိသည်ဖို့အမှန်တကယ်ကွန်နက်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်မြောက်မြားစွာကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နှစ်သိမ့်ညစ်ညမ်းမှဖွင့်ချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ငါအောက်ခြေကိုနှိပ်ပါ။ ငါချိန်းတွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအလှဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။ သူမသည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဉာဏ်ကောင်းသော၊ ငါအရူးအမူးစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်နွေးထွေးမှုမရနိုင်ခြင်းကခေါင်းမာတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုတိုတောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးငါ့ရဲ့မယုံကြည်မှုကိုသူနားလည်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါသူမနှင့်အတူထွက်တဲ့အခါငါကဒါကြောင့်ငါ့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်လုံခြုံမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သူမနှင့်စကားပြောသောအခြားယောက်ျားများကိုကျွန်ုပ်ရိုက်ယူခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့်စိတ်မချရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရအောင်ကျွန်မတို့သဘောတူလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းဖိအားပေးခဲ့ပြီးသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။
ငါတကယ်ပြproblemနာရှိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါငါအဲဒီအရာတစ်ခုခုလုပ်လိမ့်မယ်။ ငါတကယ်နားထောင်တဲ့တခြားဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုကိုငါတွေ့တယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဟော်မုန်းတွေအားလုံးကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတယ်။ ကျွန်တော့် ED ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပါ။ သူကတစ်နေ့ကျရင် Cialis ကိုပေးတယ်၊ ငါသုံးပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါကအော်ဂဇင်ကိုရဖို့အခက်တွေ့နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကောင်းတယ်။
ထိုအခါငါက porn ကိုငါ့အပေါ်မှာအရုဏ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုခွဲခြားသိဖို့ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာတာလဲမသိဘူး။ ငါ porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိရန်မခဲယဉ်းသောအခါငါအမြဲတမ်းစိုက်ထူရနိုင်သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများဟာသူတို့အခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပုံများနှင့်အတူတစ်နေ့လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသူတွေလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါငါမဟုတ်ဘူး။ ငါတစ်ပတ်နှစ်ခါလောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ် ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကငါ့ဘဝကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသလား။ ဟုတ်တယ်။ ငါရပ်ချင်ပါသလား ဟုတ်တယ်။ ငါရပ်နိုင်ပြီလား ငါစွဲလမ်းတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, ဒါပေမယ့်သူကမလွယ်ကူခဲ့။ ငါအအေးကြက်ဆင်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မရေမတွက်နိုင်သောကြိမ်ပြန်ပါပြီ။ ယခုတွင်ငါသည်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ထောက်ခံမှုကိုရှာဖွေနေပြီး SAA အစည်းအဝေးများသို့လည်းတက်ရောက်ရန်စီစဉ်နေပါသည်။
Erectile အလုပ်မဖြစ် (ကျွန်တော်တက်ရဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရုပ်သံဟာသပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေ / လူတို့သညျမွငျပါပွီမည်မျှကြိမ်။ ) အများအပြားပြက်လုံး၏တင်းပါးဖြစ်ပါသည်အဆိုပါအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hypersexual လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူသားရဲ့ကျိုးနပ်၏ဤမျှလောက်သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အပေါ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ျခြိုဖွစျဖို့အသုံးမခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့ကမယုံနိုင်လောက်အောင် Insidious အခွအေနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှကောင်လေးလိင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုမကြာခဏစဉ်းစားပါ။ ငါလိင်ရှိသည်ဖို့ငါ့အနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းစဉ်းစားတာမှတစ်ပါးအကြောင်း, ငါ့ကိုပါပဲ။
စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းသည်ငါ့သမိုင်းတစ်နည်းနည်းခြောက်သွေ့လက်တွေ့ retelling ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တက်ကြွစွာစွဲ combatting အဖြစ် ED ၏ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသူတစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်မသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထောက်ခံမှုတစ်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
81 ရက်ပေါင်း pmo ed နှင့် fetish
ကျွန်မလက်ရှိငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ybop ရှာဖွေတွေ့ရှိ, 81 နေ့ရက်ကာလအဘို့အခမဲ့ pmo နေပါတယ်။ ငါသည်ဤဖိုရမ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ဤအတွက်တစ်ဦးတည်းမ im သိရန်အလွန်ပျော်ရွှင် im, ed နှင့်လည်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခံစားနေရပြီးခဲ့ပါတယ် ..
ထူးဆန်းတာကတော့ငါ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကတည်းကငါဘယ်တော့မှမ ၀ င်ခဲ့ဘူး၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ Boobs နဲ့မြည်းစသည်တို့ကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုမလှည့်စားခဲ့ဘူး။ ငါကဒီအားဖြင့်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ကအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးငယ်များကိုကြည့်မှကြွလာသောအခါ, ငါ့ကိုတကယ်နှိုးဆော်ပါဘူး, ငါကဆိုးရွားခဲ့သမျှသောအချိန်များတွင် puking စောင့်ကြည့်ခြင်းမှကြီးမားသောစိုက်ထူရ, ငါ 11 နာရီလောက်များအတွက်ဝဘ်နေ့စဉ်လှည့်လည်လေ့ရှိတယ် တစ်နေ့လျှင် ၂-၄ ကြိမ်နှင့်တူသည်။ ငါအခု ၂၁ နှစ်ရှိပြီ
ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတည်းကရှိခဲ့သော gf တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒစ်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်ဟုထင်မိသောကြောင့်ပြissuesနာများကို ပြင်ဆင်၍ စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နို ၀ င်ဘာလက ybop ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်အထိမျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကငါ့အတွက်စိတ်ပူစရာကောင်းတယ်၊ ငါနာမကျန်းတဲ့ဒီဖက်ဆစ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာငါ့ကိုရွံရှာစေပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျန်ယောက်ျားတွေနဲ့အရမ်းကွာခြားတယ်လို့ခံစားရစေလို့ပဲ။ ငါ (လဲလျောင်း) ကျရောက်နေတဲ့ masturbate လေ့ရှိတယ်။
ဘယ်လိုငါသည်ငါ့ဦးနှောက်ဟာယောက်ျားတွေ၏ကျန်တူသောအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဖို့နှိုးဆှခံရဖို့ rewire နိုင်မလဲ?
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် ၁၂ ပတ်နီးပါးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပထမ ၄၂ ရက်ကကျွန်တော် ၄ ကြိမ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအားပြင်းထန်သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများ (မိန်းကလေးများ puking) ဖြင့် ၁၂ ပတ်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ ive ဟာ ၆ ကြိမ်နဲ့နံနက်ခင်းသစ်တောများမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တယ်။ ငါ gf နဲ့ထုထည်အစွမ်းသတ္တိ ၆၀-၈၀% အထိအောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမအတွက်အဲဒါကိုကျွန်တော်မရနိုင်ခဲ့လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ထုတ်စေခဲ့ ပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဝေးကြီးနေပြီးခံစားရတယ်။ ငါမထနိုင်ရင်အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသူမ tits နဲ့မြည်းတွေကြောင့်မနှိုးဘူး။ အခုတော့ကိုယ့်အထဲကထုတ်သောအခါငါစိုက်ထူရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကကြာရှည်မခံပါဘူးနှင့်ငါ့ဒစ်ရုံငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအဘို့အပျော့နှင့်၎င်း၏စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တစ် ဦး ပြိုကွဲခါနီးဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်လည်းအော်ဂဇင်တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူး၊ cumming မပါဘဲကြာရှည်စွာနေနိုင်သည်။ pmo သည်ကျွန်ုပ်၏နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြcနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မည်ဆိုပါကမည်သူမဆိုသိသလား။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်မေးခွန်းကငါ့ ဦး နှောက်ကိုလှည့်စားဖို့အဝတ်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ (tits and ass) ကိုလှည့်ပြီးငါ့ရဲ့ fetish ကိုထိုးနှက်နေတဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်မလား။ ငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူး၊ ငါဒီပြfixနာကိုဖြေရှင်းဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအခုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမုန်းတယ်၊ ငါဒီအဖြစ်အပျက်ကအဆိုးဆုံးပဲလို့ငါခံစားမိတယ်။ fetish + နှောင့်နှေးသည့်သုက်လွှတ်မှုဖြစ်သော်လည်းပိုမိုတောက်ပသောဘက်တွင် Io သည် ၁၂ ပတ်ခန့် pmo ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ libido နှင့်နံနက်သစ်တောများပြန်လာပြီဟုခံစားရသည်။
တဆယ်ငါးနှစ်များအတွက် PMO နေ့စဉ်
ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန် (ဂီတပညာရှင်, အဆိုတော်, နေ့စွဲများ, လူမှုရေးအဖွဲ့, etc)
self-ရက်စက်မှု ED (ငါ / ထှတျအထိပျသည်အထိတစ် 100% စိုက်ထူရယူဖို့မအောင်မြင်ဘူးခဲ့တိုင်းကြားဆက်ဆံရေးပျက်စီး)
(ဟောင်းများ) compulsive Self-diagnoser (အခြားအမူအကျင့်မမှန်၏ shared ရောဂါလက္ခဏာတွေကတဆင့်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်မျက်နှာဖုံး PMO စွဲ)
အဝလွန်, နီးပါး 100lbs ဆုံးရှုံးခဲ့ရနီးပါး 100lbs ရရှိခဲ့, တဖန် 100lbs ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် မှစ၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိသော 'စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း' (ကျွန်ုပ်ကြိုးပမ်းရမည့်ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ)
ကျွန်ုပ်သည်အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲစွဲနေသောအသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအစပြုခဲ့တာလဲငါမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါသိတာကငါစလုပ်ကတည်းကငါမရပ်လိုက်ဘူး ငါငယ်ငယ်တုန်းကလက်တစ်ဆုပ်စာမဂ္ဂဇင်းတွေတွေ့ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုခံခဲ့ရတယ်၊ အဲဒီတုန်းကမဂ္ဂဇင်းတွေ၊ mags တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ Premium ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေရဲ့ညနက်ပိုင်းမှာအပြာရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကျွန်မတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို Spice ရုပ်သံလိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်၊ ရံဖန်ရံခါ Spice ရုပ်သံလိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်ပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင်နာရီအနည်းငယ်နာရီအတွင်း 'သော့ဖွင့်' ခံရလိမ့်မည်။ ငါတဆယ်နှစ်သို့မဟုတ်တဆယ်နှစ်ပတ်လည်နောက်ဆုံးတော့ငါတစ်နေ့လုံးနှင့်ညဉ့်အဘို့အကြည့်ရှုရန် DSL modem နှင့် privacy ကိုလက်လှမ်းမီခဲ့သည့်အခါဖြစ်ပါသည်, ငါပြောနိုင်ပါတယ် ထို့နောက် chat ခန်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ animated .gifs များ၊ ရုပ်ရှင်ကားများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်အမျိုးမျိုးသောအခမဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအဆုံးမဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်စတင်ရန်နှင့်မကြာမြင့်မီအချိန်များစွာကြာမြင့်သည်။
ငါအတိတ်သည်တဆယ်ငါးနှစ် _everyday_ masturbated ။
အများစုမှာရက်, ငါ 3-4 ကြိမ် masturbated ။
ငါဆယ်သုံးနှစ်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစတင်ခဲ့ပြီး (သူတို့သည်ထိုအသက်အရွယ်တစ်စုံတစ် ဦး အဘို့သူတို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ထွက်ကစားခဲ့ကြသည်) ငါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတော်တော်လေးပေါ့ပေါ့တန်တန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါကစာမထိုးခဲ့ပေမဲ့ငါကမင်းသမီးလေးတွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုခံရပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများနှင့် PMO နှင့်ဆက်ဆံစဉ်ပြproblemsနာမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ၁၇ နှစ်တိုင်အောင်“ ပြproblemနာမရှိ” ဟုထင်ရသည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ သူမအိမ်ကိုသွားတယ်။ ငါသူမကိုအိပ်ခန်းထဲထည့်လိုက်တယ်။ သွားဖို့အဆင်သင့်ပဲ။
အဘယ်အရာကို fuck ဆိုတဲ့?
သူမထွက်ခွာသွားပြီးနောက်, ငါကွန်ပျူတာပေါ်မှာ hopped ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုတက် loaded နှင့်လုံလောကျသေချာ။ စိုက်ထူပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသူသည်ငါတကယ်သူမ၏လိုချင်သော်လည်းငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအပုတ်ခံခဲ့ရ, ED နှင့်အတူအတွက်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပြေးခဲ့ပါတယ်။
ဆယ့်ရှစ်နှစ်မှာငါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ငါတို့ရဲ့ဘဝဟာကောင်းတယ်။ ငါခိုင်မြဲသောစိုက်ထူတယ်, ငါတို့လအနည်းငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစောင့်ရှောက်မှုယူခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အစပိုင်းဘုန်းအသရေရှိသောနေ့ရက်များပြီးနောက်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်ကကျွန်ုပ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာများရပ်တန့်သွားသည်အထိမကြာပါ။ ငါသူမငြီးငွေ့ဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟာပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ ငြီးငွေ့စရာကောင်းလာတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများယိုယွင်းလာတယ် ငါတို့အချင်းချင်းချစ်ကြတယ်၊ ကျွန်တော့်ပြproblemနာကိုတစ်ခါမှဝန်မခံဘူး။
ငါနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ဆံရေးဟာအဆုံးသတ်သွားတယ်။ ငါသည်ငါ့ခိုလှုံဘဝကိုဆက်ပြောသည်။ ငါကောလိပ်မှထွက်ခဲ့သည် ပုံမှန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်မနေခဲ့ဘူး ငါလျောက်ပတ်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါလူ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရုန်းကန်။ ငါ့ဝါသနာတွေကိုငါစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ ငါရိုးရှင်းစွာထိုနေ့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုရှောက်သွားလေ၏။ အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုကမပြောင်းဘူး၊ ငါ PMO ပဲ။
အသက်နှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်“ ဗိုလ်ကြီးများကိုနောက်တစ်ကြိမ်ခေါ်” ခဲ့သည်။ ငါပါတီတစ်ခုကိုသွားပြီးငါ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ (ငါဖြစ်ချင်တဲ့) နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ယူခဲ့တယ်။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး bombshell ဆင်းသက်နှင့်သူမနှင့်အတူကပယ်နှိပ်ပါ။ လက်မှတ်ထိုးတံဆိပ်ခတ်, ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သော်လည်းပြန်လည်ပိတ်ပစ်ရန်အချိန်များစွာမယူခဲ့ပါ။ ငါမဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့လို့ဒီဆက်ဆံရေးဟာလအနည်းငယ်အကြာမှာဆုံးသွားတယ်။
သတိပြုသင့်သည်မှာကျွန်ုပ်၏လေးနက်သောဆက်ဆံရေးနှစ်ခုစလုံးသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရည်အသွေးရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိသော်လည်း၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တသမတ်တည်းမဖြစ်နိူင်ပါ။ သူတို့သည်ငါ၏အစွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုမသိရုံမကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားအစစ်အမှန်ကိုတစ်ခါမှမသိခဲ့ကြပါ။ ကျွန်မရဲ့စိတ်ခံစားမှုကအရမ်းမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ထက်စိတ်ကြွစိတ်ရောဂါခံစားလွယ်သူတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သူသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌ရှိနိုင်ပြီးမည်သူသည်တစ်နေ့နေ့တွင်ဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည် တစုံတခု ငါ့ကိုကျောကိုင်ထားခဲ့သည်။
ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများစွဲစွဲနေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ဘဝသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်သို့လှည့်ပတ်သွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တသမတ်တည်းဖြစ်သောပြissuesနာများရှိသောအမျိုးသမီးများသာမကဘဝပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆုလာဘ်တိုက်နယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျန်းမာစွာလိုက်စားခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ၎င်းသည်လက်ဖဝါးတွင်လိုအပ်သောအပျော်အပါးအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အာရုံခံစားမှုသည်ခံစားခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသည်ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ငါအရာရာဆုံးရှုံးသွားတယ် ငါဘယ်တော့မှမပျော်ဘဲနေစဉ်ငါသာနေ့တိုင်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ ငါအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေကိုတောင်ငါအရမ်းသဘောကျမိတယ်။ ငါနီးပါး မလိုချင်ဘူး ပျော်ရွှင်ရန်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ၊ OCD၊ asperger's, SAD စသည်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရောဂါရှာဖွေခဲ့သည်။ ဤအတွေးအခေါ်များအားလုံးသည်မှန်ကန်သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်တရားဝင်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာများထဲမှသားကောင်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ငါသာတစ်ခုအဖြစ်ဤရောဂါမှလှည့် ခွင့်လွှတ် ကြှနျတေျာ့စစ်မှန်တဲ့စွဲ mask ရန်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အချိန်ကုန်သက်သာစေဖို့အတွက်ဒီဇာတ်လမ်းကိုဗားရှင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါ့မယ်။ နောင်လာမယ့်ဘလော့ဂ်တွေမှာအရာအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းထုတ်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဖိုရမ်ကိုမကြာခဏတက်ရောက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဒိုင်ယာရီတွင်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် YBOP ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပုံမှန်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး၊ ယခင်ကြိုးပမ်းမှုများမအောင်မြင်ပြီးနောက် ၁၀ လခန့်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါဒီကိုပြန်လာခဲ့တာ၊ ငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုလူသိရှင်ကြားမှတ်တမ်းတင်မယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်ဖို့ပိုလွယ်ကူသွားတယ်။
ငါ 14 ကြီးကအပြည့်အဝ porn သွေးဆောင် ED မှထမြောက်ဖို့ 111 ရက်ပေါင်းငါ့ကိုယူကတည်းက Long ကပုံပြင်တိုတို, ငါကညာခဲ့, ငါ porn တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် (တစ်ခါတစ်ရံထက်ပို) ကြိမ်နေ့ masturbated ။ ကိုယ့် 22 လှည့်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအောင်မြင်သောလိင်ခဲ့လေသည်။ လအောက်ပါစုံတွဲကျော်, လိင်ပိုကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်, ငါပိုပိုပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အစဉ်အမြဲငါဘဝမှာခံစားခဲ့ရဖူးကိုအကောင်းဆုံးခံစားခဲ့သည်။
အမှုအရာမျိုးကိုရှုပ်ထွေးရနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ကျွန်တော့်ကိုလှောင်ပြောင်နေသောအခြားမိန်းမများအတွက်“ ထူးဆန်းသောလက္ခဏာ” ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအသက်ငါးနှစ်မပြည့်ခင်မှတ်မိနေသမျှကာလပတ်လုံးအဲဒီအတွေးတွေရှိနေပြီးသူတို့ကငါ့ကိုအမြဲနှိုးဆွပေးခဲ့လို့ပါ။ ငါမူကား porn သည်ကျွန်ုပ်၏သဘာဝသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုတီထွင်ခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်အခြား kinks များသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကြည့်မည် 14 သည်အရာရာတိုင်းကိုအသက် ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်သို့မဟုတ်၊ ၂၁ နှစ်၌ပင်လှည့ ်၍ မရ။ ဤအရာသည်လူ့ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသောအပြာပုံနမူနာဖြစ်သည်။ ငါဟာသဘာဝကျပြီး“ kinky” porn ဖြစ်နေပေမယ့်ငါ့ရဲ့ kinks တွေဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အစွန်းရောက်များ (BDSM နှင့်စသည်တို့ကို ... သင်စဉ်းစားသောအခါအမှန်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်) ရောက်ရှိစေသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်မရည်းစားနဲ့အောင်မြင်စွာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမဲ့တစ်ခုခုတော့ပျောက်နေတယ်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော်ဟာသဘာဝအရလိုလိုလားလားမထားဘူး။ ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ရှက်ခြင်းကြောင့်ငါသည်ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအားမပြောခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်မှုများကိုပြန်လည်ကျွေးမွေးရန်နောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံရှာဖွေခြင်းကိုမှားယွင်းခဲ့သည်။ နောက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုမင်းခန့်မှန်းလို့ရတယ်။
တစ်ချိန်ကအပြာရုပ်ပုံကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်း (အလွန်ပျော့ပျောင်းသောအရာများ) ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်ကြည့်ခဲ့သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၂၁ နှစ်တာကာလအတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကြည့်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ငါနက်ရှိုင်းသောနေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလအနည်းငယ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုပြန်ကျဆင်းလာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ငါအရမ်းအလေးအနက်ထားဒီတော့ကင်လုပ်ခိုင်းခံစားရတယ်။
ယခုငါတစ်ပတ်ခန့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေးများကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့ရပါ။ ငါဒီနေ့နှစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးပြီ၊ ငါပြန်ကောင်းလာမယ့်အချိန်အထိဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီ "reboot take 2" ၏စတင်သည့်ပုံပါဘဲ။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် ED အတွက်လူစိမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အမြဲတမ်းဖြည့်တင်းပေးသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ ပတ်ကမင်းရဲ့ Brain On Porn ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ Netflix မှာဆိုးဝါးတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုငါပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါတစ်ခုမှတစ်ခုထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းမှုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိပြီးကတည်းက (ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မတတ်သူ) ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆိုက်ကိုအလုံအလောက်မဖတ်ရှုနိုင်ဘဲနေ့စဉ်မပြတ်ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်သိသောအရာသည်မကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူမှုကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသာရနိုင်သည်၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံပုံမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံညစ်ညမ်းသောမိန်းမများအကြောင်းသာဖြစ်သည်။ အပေါင်းဘက်မှာတော့တနင်္ဂနွေနံနက်ခင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။
ငါ PMO- အခမဲ့သွားအကြောင်းကိုကြောက်လန့်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအစီအစဉ်ကိုတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုမျှလောက်လျှော့ချပါကကြက်ဆင်လုံးဝအအေးခံရန်လိုအပ်ပါသလား။ ငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိဘဲရက်အနည်းငယ်ကျော်သွားပြီဟုမထင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ထိုအတိုင်းပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလိုသည်။